ငွေလမင်း: 10/1/10 - 11/1/10
ကျွန်တော် စာစရေးတော့ ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးတွေကို ရေးမယ်လို့ စဉ်းစားခဲ့တာပါ တ ကယ်ရေးဖြစ်တော့ ၊ ဖတ်ထားတာတွေရော မှတ်ထားတာတွေရော ၊ ကြားဖူးခဲ့တာတွေ အတွေ့အ ကြုံတွေရော ရေးဖြစ်လာပါတယ် ၊ တခါတရံမှာ ဘာသာပြန်လေးတွေ ရေးချင်လာပါတယ် ၊ ဘာ သာပြန်လေးတွေ တော်တော်များများကတော့ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ chicken soup for the soul at work (101 stories of courage companion & creativity in the work place) တွေထဲက အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ စာတိုပေစလေးတွေပါ ၊ ဒီစာအုပ်ကို ကမ္ဘာကျော် chicken soup for the soul series မှ ၊ စီးပွားရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် သီးခြားထုတ်ဝေထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီအထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ၀တ္ထုလိုလို ပုံပြင်လိုလို စာတိုပေစလေးတွေဟာ လူကြီးတွေအတွက် အရေပြား ပေါ် အယားပြေ လေးတွေဖြစ်နိုင်လောက်ပေမဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ရွယ်တူလူငယ်များအတွက်တော့ တစုံ တစ်ခုကို ညွန်ပြပေးနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ကယုံကြည်တာ ကြောင့်ရယ် ၊ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော် သိတဲ့ စကားပုံလေးတစ်ခုထဲက It’s the essence of peinus to make use of the simplest of ideas. အစွမ်းအစ ရှိသူတွေရဲ့ အနှစ်သာရဟာ သာမန်အကျဆုံး စိတ်ကူးလေးများကို အသုံးတည့် အောင်ပြုလုပ်နိုင် ခြင်းဖြစ်ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်သားထားဖူးပါတယ် ၊ ဘာသာပြန်တင်မဲ့ နေ့မှာ ဒီစာသားလေးကို သွယ်တန်းပြီး ပိုစ့််တင်ပါ့မယ် ၊
တခါတုန်းက မြို့လေးတစ်မြို့က လမ်းဆုံတစ်နေရာမှာ လူငယ်လေး တစ်ဦးဟာ ကုန်စုံဆိုင်လေး တစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားတာပေါ့ ။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ် ၊ ကြိုးစားတယ် ၊ ဖော်ရွေတယ် ဒါကြောင့် လူချစ်လူခင်များတယ် ၊ လူတွေဟာ သူ့ဆိုင်မှာ ဈေးဝယ်တယ် ၊ သူများတွေကိုပါ ၀ယ်သူတွေက တိုက်တွန်းပေးတယ် ၊ ဒီတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စည်ပင်လာတယ် ၊ ဆိုင်သေးသေးလေးကနေ ဆိုင်ကြီးဖြစ်လာတယ် ၊ တစ်ဆိုင်ကနေ နှစ်ဆိုင် သုံးဆိုင် တစ်နိုင်ငံလုံး တနံတလျား ဆိုင်ခွဲတွေ အများကြီး ဖြစ်လာတာပေါ့ ၊ တနေ့တော့ သူဟာ ဆေးရုံမှာ ဘုန်းဘုန်းလဲပါလေရော ၊ ဆရာဝန် တွေက ဒီတောင်ကို မကျော်နိုင်တော့ မှန်းသိနေကြပြီ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ သားသုံးယောက်ကို ဆေးရုံကို ခေါ်လိုက်ပြီး ၊ အရည်အချင်းစစ် ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်တယ် ။
“မင်းတို့သုံးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ အဖေနှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူ ထူထောင်လာခဲ့တဲ့ ကုမ္မဏီကြီးမှာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမယ် ၊ ဒီရာထူး အခုဘယ်သူနဲ့ ထိုက်တန်လဲ ဆိုတာ ငါအခု ဆုံးဖြတ်မယ် ရော့ ဒီမှာ တစ်ဒေါ်လာတန် တစ်ရွက်စီယူသွားကြ ၊ ၀ယ်ချင်တာဝယ်ခဲ့ ၊ ညနေ ဆေးရုံကို ပြန်လာခဲ့ကြ ၊ ၀ယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ဒီအခန်းထောင့်စေ့ ပြည့်အောင်ဖြည့် နိုင်ရမယ် ”
သားသုံးယောက်ဟာ အောင်မြင်နေတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးမှာ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရမယ် ဆိုတော့ ၀မ်းသာ ပီတိဖြစ်ကြတာပေါ့ ၊ မြို့တွင်းဝင်ပြီး တစ်ဒေါ်လာဘိုး အပြိုင်အဆိုင် ဈေးဝယ်ထွက် ၊ ညနေကြ တော့ အဖေဖြစ်သူကမေးတယ် “သားကြီး မင်းတစ်ဒေါ်လာနဲ့ ဘာဝယ်လာသလဲ ” “အဖေ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းရဲ့ ယာတောကိုသွားပါတယ် ၊ တစ်ဒေါ်လာပေးပြီး ဟောဒီ ကောက်ရိုးနှစ် ထုံးဝယ်လာပါတယ် ” ကောက်ရိုးတွေကို အခန်းထဲဖြန့်ခင်းပြီး လိုက်တယ် ။ အခန်းထဲမှာ ကောက် ရိုးတွေ ကြဲပြန့်သွားပေမဲ့ ၊ ထောင့်စေ့အောင် မပြည့်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ။
ဒါနဲ့အဖိုးကြီးက “သားလတ် မင်းကော တစ်ဒေါ်လာနဲ့ ဘာတွေဝယ်လာ ခဲ့သလ”ဲ “ကျွန်တော် ကုန်ပဒေသာ တိုက်ကြီးတစ်ခုကို တက်ပြီး ဟောဒီ ကြက်မွှေးနဲ့ လုပ်တဲ့ ခေါင်းအုံးနှစ်လုံး ၀ယ်လာပါတယ် ” ကြတ်မွှေးခေါင်းအုံးကို ဖောက်ပြီး အခန်းထဲကိုဖြန့်ကြဲလိုက်ပေမဲ့ အခန်းက ထောင့်မစေ့ပြန်ပါဘူး ၊
“ကဲသားငယ် မင်းရော တစ်ဒေါ်လာနဲ့ ဘာဝယ်လာသလဲ ” “အဖေ သားကတော့ အဖေအရင် တုန်းက ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်မျိုးကို တွေ့အောင်ရှုာခဲ့ပါတယ် ။ ဆိုင်ရှင်ကို တစ်ဒေါ်လာပေးပြီး အကြွေ အရင်ဖြတ်လိုက်ပါတယ် ၊ ဆင့်ငါးဆယ်နဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တစ်ခုကို အရင်ဆုံးလုပ် လိုက်ပါတယ် ၊ နောက် ဆင့်နှစ်ဆယ်ကို ကုသိုလ်ဖြစ် လူမှု့ရေးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကို လှူဒါန်းလိုက် ပါတယ် ၊ နောက်ဆင့်နှစ်ဆယ်ကို ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို လှူလိုက်ပါတယ် ၊ ကျန်တဲ့ ဆယ်ဆင့် နဲ့ ဒီပစ္စည်းနှစ်ခု ၀ယ်လာပါတယ် ”
သားငယ်ဟာ သူ့အိတ်ထဲက မီးခြစ်ဗူးနဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ် ၊ မီးခြစ်ပြီး ဖရောင်းတိုင်လေးကို မီးညှိလိုက်ခါ ၊ လျှပ်စစ်မီးကို ပိတ်လိုက်တယ် ၊ ဖယောင်းတိုင် မီးအလင်းရောင်ဟာ တစ်ခန်းလုံးကို ထောင့်စေ့ ပြည့်လျှံအောင်ထိ ထွန်းလင်းသွားပါတယ် ၊ အဘိုးကြီးဟာ အရမ်းဝမ်းသာပြီး “ဒါမှ ငါ့သားကွ မင်းသာဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ထိုက်တယ် ၊ လူ့ဘ၀ အတွက် အရေးကြီးဆုံး သင်ခန်းစာကို မင်းသဘောပေါက်တယ် ၊ ဉာဏ်အလင်းရောင်ကို မင်းဘယ်လို ထွန်းညှိရမယ်ဆိုတာ မင်းသဘောပေါက်တယ် ၊ လူ့ဘ၀မှာ ဒါအရေးကြီးတယ်ကွ။
Nido Qubein ရဲ့ Let your light shine ကိုပြန်ဆိုပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ တချိန်မဟုတ် တချိန်ချိန်မှာ ဒေါ်လာတစ်ရွက်ပေးပြီး လူစွမ်းလူစ ပြရမဲ့ အခွင့်အခါမျိုး ကြုံကြရပါလိမ့်မယ် ၊ အဲဒီအခါမှာ သားငယ်လေးလို လူစွမ်းလူစ ပြနိုင်လျှင်ဖြင့်……။
အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ငွေလမင်းတို့က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် …..။
Posted by ငွေလမင်း at 9:58 PM 18 comments
ဒီတလော မဟာဂီတသီချင်း အကြောင်းရေးဖို့ ၊ ထံတျာတေရှင်သီချင်းကို အင်တာနက်မှာ ရှာရင်း နဲ့ ၊ ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်းလာတွေ့ပါတယ် ၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေက အစုံပါဘဲ ၊ မြန်မာ ကိုးရီး ယား ၊ အင်္ဂလန် ၊ ဂျပန် နိုင်ငံအလိုက် လုပ်ပုံလုပ်နည်း တော်တော်လေးစုံပါတယ် ၊ ယူကျု့မှာ ရှိတယ် အကုန်လုံး ၊ ဒိန်ချဉ်ကို ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက အရမ်းကြိုက်တယ် ၊ စားတာ မှ တော်တော်လေး စားပါတယ် ၊ ဒိန်ချဉ်ကို ထန်းလျှက်ရေနဲ့ စားတာ ပိုကြိုက်ပါတယ် ၊ အချို့နိုင်ငံ တွေမှာတော့ ပျားရည်နဲ့ စားသောက်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သကြားနဲ့လဲ စားသုံးတာ တွေ့မြင်ဖူးပါတယ် ၊ဒိန်ချဉ်ဟာ အသားရေ လှပစိုပြေစေသလို ၊ ကိုယ်အနံ့ဆိုးတွေ ကင်းစေတယ် ၊ နောက်ပြီး အူမကြီးကို ကောင်းစွာအထောက်ကူဖြစ်စေလို့ ၊ ၀မ်းကိုလွယ်ကူစေတယ် ၊ အနာကို ကျက်စေတယ် ၊ အူမကြီးကင်ဆာကို မဖြစ်စေဘူး ။
ဒါကြောင့် ကမ္ဘာအရပ်အရပ် နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ၊ ဒိန်ချဉ်ကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြသလို ၊ အများစု စားသောက်ကြပါတယ် ၊ ဒိန်ချဉ်ဟာ လတ်ဆတ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ဆိုရင် စိမ့်တဲ့အရသာ ရှိပါတယ် ၊ ရက် လွန်ဒိန်ချဉ်ကတော့ ချဉ်တဲ့အရသာ ရှိပါတယ် ၊ ချဉ်တာမှ အက်ဆစ် ချဉ်သလိုချဉ်ပါတယ် ၊ အထက်က ဖော်ပြအပ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ရက်မလွန်သေးတဲ့ ဒိန်ချဉ်ကိုစားသုံးမှသာ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ရက်လွန်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ကတော့ ဘေးဥပါဒ်ကိုဖြစ်စေပါတယ် ၊ ယောမင်းကြီးဦး ဘိုးလှိုင်ရဲ့ နာမည်ကျော် ဥတုဘောဇနသင်္ဂဟကျမ်းလို့ ခေါ်တဲ့ အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းမှာ ဒိန်ချဉ်သည် သွေးကိုသန့်စေ၏ ၊ ၀မ်းမီးအပူကိုအေးငြိမ်းစေ၏ ၊ ဆီးဝမ်းလေတို့ကိုသက်စေ၏ ၊ အသားအရေကိုလှပစေ၏ ၊ အရိုးချဉ်ဆီကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်၏ ၊ သလိပ်ဒေါသ စမြင်းဒေါသကို ကင်းရှင်းစေတတ်၏ လို့ရေးသားထားပါတယ် ၊ သို့သော် ရက်လွန်ဒိန်ချဉ်များကတော့ ထိုကဲ့သို့ ကောင်းကျိုးပေးစေတတ်မယ်လို့တော့ မထင်မှိပါဘူး ၊ အစားအစာများကို ရေရှည်ခံအောင်လုပ်ပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတတ်တဲ့ ယနေ့ခေတ်ခါမှာ ဒိန်ချဉ်များဟာ ရက်ပေါင်းများစွာ ခံအောင် အအေးခန်းထဲမှာထားပြီး ရောင်းချတတ်ကြသမို့ ၊ ရက်လွန်တဲ့ ဒိန်ချဉ်တွေအဖြစ်သာ ဈေးကွတ် အတွင်းမှာ မြင်တွေ့နေရပါတယ် ။
ဒိန်ချဉ်ရဲ့သက်တမ်းဟာ ဒိန်ချဉ်ဖြစ်ပြီး သုံးရက်အတွင်းသာဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒါကြောင့် လောကနီတိမှာ သုံးရက်လွန်သော ဒိန်ချဉ်ကိုမမှီဝဲရာ ၊ အရွယ်လွန်သော မိန်းမ၌ မေထုန်မမှီဝဲရာ ၊ တပေါင်းတန်ခူးစ သောပူပြင်းသော နွေကာလတို့၌ နေ့လည်နေခင်းမအိပ်ရာ လို့ဆုံးမထားပါတယ် ၊ ဒီစကားရပ်များကို နီတိဆရာဟာ ဘုရားဟော ပါဠိတော်များမှ ကောက်ယူဖော်ပြထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၊ ကမ္ဘာကျော် မင်းသမီးကြီး အယ်လီဇဘက် တေလာနဲ့ အခြားသော မင်းသမီးတချို့ဟာ ညဘက်မှာ ဒိန်ချဉ်ကို လိမ်းပြီး အိပ်တယ်လို့ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ် ၊ ကျွန်တော် ထိုင်းမှာနေစဉ်က မဟာချုလာ လောင်ကွန်း တက္ကသိုလ် ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ဒိန်ချဉ်ကို သုတေသန လုပ်တာကို တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ် ၊ ဒိန်ချဉ်ကို အတုံးငယ်လေးတစ်ခုကို မိုက်ခရိုစကုတ်နဲ့ ပုံကြီးချဲ့ကြည့်လိုက်ရင် ဘက်တီးရီးယား ပိုးကောင်လေးတွေ အကောင်ပေါင်းသန်းချီပြီး တွေ့နိုင်တယ်လို့ သုတေသနအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းက ဆိုပါတယ် ၊ နို့အချဉ် ပေါက်သွားတာ အဲဒီပိုးကောင်လေးတွေ မွေးဖွားဖို့လို့ ဆိုပါတယ် ၊ ဒီိပိုးကောင်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ ပိုးကောင်တွေလို့ လဲဆိုပါတယ် ၊ ဒီပိုးကောင်လေးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောက်သွားရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက လူကိုဥပါဒ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ပိုးကောင်တွေကို ကိုက်ဖြတ်စားသောက်ပါသတဲ့ ၊ အထူးအားဖြင့် ၀မ်းကို ကိုက်စေတတ်တဲ့ ပိုးတစ်မျိုးကို အထူးနိုင်နင်းလို့ ၊ ဒိန်ချဉ်ကို တနေ့ကို ၂၀ဂရမ် ပုံမှန်စားသုံးရင် အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘူးလို့ သူငယ်ချင်း ဒေါက်တာမင်းမြတ်က ဆိုပါတယ် ။
ဒိန်ချဉ်ထဲမှာ ပါတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေဟာ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိရင် သေပါသတဲ့ ၊ အအေးချိန် ၅၅ ကျော်ရင်လဲ သေဆုံးတတ်ပါတယ်တဲ့ ၊ သူ့အလိုလိုကတော့ နာရီပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာရင် သေတယ်လို့လဲ မင်းမြတ်က ပြောပါတယ် ၊ ဘက်တီးရီးယားလေးတွေ သေဆုံးပြီးမှ စားသောက်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးမဖြစ်စေတဲ့ အပြင် ၀မ်းပျက်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ လောကနီတီ စကားနဲ့ အလွန်ပင်ကိုက်ညီပါတယ် လောကနီတိမှာ သုံးရက်ကျော် သော ဒိန်ချဉ်လို့ ဆိုထားသလို ၊ ခေတ်သစ်ဆေးပညာမှာတော့ နာရီပေါင်း ၆၀ ကျော်ဆိုတော့ တိုက်ဆိုင်စွာဘဲ ခေတ်ဆေးပညာနဲ့ ရှေးပညာရှိတို့စကားဟာ ကိုက်ညီနေပြန်ပါတယ် ။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ အစာလဲဆေး ဆေးလဲအစာဆိုသမို့ ၊ ဒိန်ချဉ်ကို ဆေးလိုဘဲစားစား မုန့်ပဲသရေစာ အနေနဲ့စားစား တခါတရံစားမှိကြမှာတော့ အမှန်ပါဘဲ ၊ စားသောက်ကုန်များဟာ တခါတရံမှာ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ လတ်ဆတ်မှုအစား တာရှည်အထားခံမှုကို ဘဲအဓိကထား ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားကြသမို့ ၊ အားတဲ့ တနေ့နေ့မှာ ဒိန်ချဉ်ဖောက်ပြီး စားလျှင်ရင်ဖြင့် ၊ အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ ။ အာရောဂျံ -အနာကင်းခြင်းသည် ၊ ပရမံ-မြတ်သော ၊ လာဘံ -လာဘ်ပေတည်း ၊ ဟူသော ဘုရားဟော ဒေသနာနှင့် အညီ ၊ အသက်ရှည် အနာကင်းကြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ ဒိန်ချဉ်အ ကြောင်းသိသလောက် ၊ ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ် ။
အားလုံးအသက်ရှည် အနာကင်းဖို့ ငွေလမင်းတို့က ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။
Posted by ငွေလမင်း at 10:32 PM 8 comments
ကမ္ဘာကျော် အင်းစိန်ထောင်ကြီးပုံ(အပေါ်စီးမှ ကြည့်ပုံ)
ကဲသွားမယ်ဟေ့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်က ဘာလုပ်ရမှာတုန်း ဆေးအိတ်ကိုင်၊ ဟုတ် ဆရာညွန့် မလိုက်ဘူးလား၊ ဟေ့ ကောင်လေး ထောင်ဟ၊ ဟိုတယ်မဟုတ်ဘူး လိုက်ချင်တိုင်း လိုက်လို့ မရဘူး သုံးယောက်ဘဲ ၀င်လို့ရတယ်၊ ငါရယ်မင်းရယ်၊ နက်စ်ရယ် သုံးယောက် အကိုက်ဘဲ ဆရာညွန့် အိမ်စောင့်ရမယ် “ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး” ကောင်လေး မင်းဆေးအိတ် ငါ့ပေးစမ်း ငါထည့်စရာရှိလို့ကျွန်တော် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဆေးပြင်းလိပ်တွေကို လက်မလောက် အတိုလေးတွေ ညီနေအောင် ဓားနဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်အတိုလေးတွေပါ။
“ကိုကို အဲဒါ ဆေးပြင်းလိပ်တွေမလား ဘာလုပ်တာတုန်း” မင်းမသိပါဘူး ကောင်လေးရာ၊ ဟိုရောက်တော့မှကြည့် “မင်းရဲ့ ကိစ္စ ၀ိစ္စတွေကပြီးပလား” “ပြီးပြီလေ ဘာမှသိပ်မပါပါဘူး ချောကလက်လေးရယ်၊ ဆန်းလိုက် ဝေဖာနှစ်ထုပ်ရယ်၊ ရေဗူးရယ် ပိုက်ဆံအိတ်ရယ် ဒါဘဲ၊ ရော့ ဒီသတင်းစာ စက္ကူလေးတွေ မင်းအိတ်ထဲ ထည့်ခဲ့၊ ဘာလုပ်ဖို့တုန်းဗျ၊ သေသေချာချာ ထည့်ခဲကွာ စကားမများနဲ့ အသုံးရှိလို့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော့်အိတ်ထဲကို သတင်းစာ စာရွက် လက်သုံးလုံးလောက် ဖြတ်ဖြတ်ပြီး အထပ်လိုက်လေးတွေကို ကလစ်နဲ့ကိုက်ပြီး ထားတဲ့ စက္ကူလေးတွေတစ်ထပ်ကို ကျွန်တော့် ကျောပိုးအိတ်ထဲကို ထည့်ပေးပါတယ်၊ အားလုံးပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ကနေ အကျဉ်းဦးစီး သာယာဝတီ ဆိုတဲ့ တံဆိပ်နဲ့၊ ဂျစ်ကားအပြာရောင် တစ်စီးထိုးရပ်လာပါတယ်၊ တီတီ၊ ကဲ ကောင်လေး သွားကြမယ်၊ ကားရောက်ပြီ ။
ကားရှေ့ခန်းမှာ ကိုကိုကြီး စီးပြီးတော့၊ ကျွန်တော်က ကားနောက်က စီးရပါတယ်၊ သာယာဝတီ ဆေးရုံကြီးကို ရောက်တော့၊ အသင့်စောင့်နေတဲ့ ဆေးရုံပြာတာ တစ်ယောက်ဟာ ဆေးဘောက်ကို ကိုင်ပြီး ကားပေါ်တက်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်နဲ့ နောက်ခန်းမှာ အတူတူစီးပြီး၊ ဆရာကြီးရဲ့ နဲ့ဘာတော်လဲ ဘာညာ သာရကာ မေးမြန်းပါတယ်၊ နာမည်က ကိုငွေစိုးလို့ ပြောပါတယ်၊ သာယာဝတီ ထောင်အ၀ကို ရောက်ပြီဆိုကြပါတော့ဗျာ၊ ဂျိုင်း ဒီအသံကြီးက သာယာဝတီ ထောင်ဗူးဝလို့ ခေါ်တဲ့ ထောင်တံခါးမကြီး အောက်က တံခါးငယ်လေးရဲ့ ပိတ်သံပါ၊ သာယာဝတီထောင်မှာ အခြားထောင်တွေနဲ့မတူ ထောင်ဗူး နှစ်ခုရှိပါတယ်၊ တစ်ပေါက်ကတော့ အခြားထောင်တွေများလို ထောင်ဗူးဝကြီးပါ၊ ကျန်တစ်ပေါက်ကတော့ ဆရာစံဗူးလို့ခေါ်ပါတယ်၊ ဒီဆရာစံဗူးဆိုတာက နယ်ချဲ့တွေကို တော်လှန်ပုန်ကန်ခဲ့တဲ့ သုပန္နက ဂဠုန်ဆရာစံ အတွက် ဖောက်ခဲ့တဲ့ အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်၊ အကြောင်းက ဒီလိုပါ ဆရာစံကို ကြိုးပေးဖို့ သာယာဝတီ ထောင်မှာထားဖို့ ခေါ်လာစဉ်က ဆရာစံကို ထောင်ဗူးဝကြီးက သွင်းပါတယ်။
ထောင်ဗူးဝဆိုတာ လူတွေကို နံနှိမ် ထားတဲ့နေရာလို့ ဆိုပါတယ် ၊ အဲဒီဗူးကြီးရဲ့ အမြင့်အုတ်ရိုးပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အညစ်အညမ်း ပစ္စည်းတွေနဲ့ စီမံထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်ဟာ ကာယ သိဒ္ဓိစတဲ့ ဆေးတွေ အင်းတွေ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထိုးထားမယ်ဆိုရင် ထောင်ဗူးဝကို ရောက် တာနဲ့ ထိုဆေးတွေဟာ အာနိသင် ပျက်ပြယ်သွားပါတယ်၊ အကြောင်းကတော့ ထိုလူဟာ ဆေးတွေရဲ့ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ထောင်ထဲမှာ ရိုက်ရင်ထုရင် မနာကျင်တော့တာကြောင့် အာဏာဖီဆန်တာတွေ ထောင်ထတာတွေ လုပ်မှာစိုးတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက စနစ်တကျ လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆရာစံကို ဒီထောင်ဗှူးဝကနေ သွင်းတဲ့အခါမှာ ဆရာစံဟာ မ၀င်ဘဲ ပေရပ်နေပါတယ်၊ ထောင်ကြပ်တွေ ဘာယာတွေက ထုထောင်းရိုက်နှက်သော်လည်း ဆရာစံဟာ အခြားအပေါက်ကနေ မသွင်းရင် မ၀င်ဘူးလို့ ပေရပ်နေတာကြောင့်၊ ထောင်ရဲ့အခြား တစ်ဖက်ကနေ ဆရာစံဝင်ဖို့ အပေါက်တစ်ခု ဖောက်ပေးလိုက်ရပါတယ်၊ အဲဒီခေတ်က အခြေအနေအရ ဆရာစံဟာ အင်မတန် သြဇာကြီးတာက တစ်ကြောင်း၊ ဆရာစံကို အကြောင်းပြုပြီး နောက်လူတွေက အစိုးရမင်းတွေကို ပုန်ကန်ခြားနားမှာ စိုးရိမ်လို့ ဖောက်ပေးလိုက်ရတာလို့ ပြောပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ ဆရာစံ ဗူးအကြောင်းသိကောင်းစရာလေး တစ်ခုပါ ။
ဂျိုင်း ဒီအသံကြီးလဲ ကြားလိုက်ရော ကျွန်တော် ထောင်ထဲကို ရောက်နေပါပြီ၊ အဲဒီအသံကြီးကို ကြားလိုက်တာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ငါတို့ပြန်မထွက်ရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ၀င်လာပြီး ကြောက်လှန့်မှိပါတယ်၊ စိတ်က ကြောက်ကြောက်ရှိတာမို့ ကိုကိုဂျုတီ ကုတ်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်မှိ ပါတယ်၊ ဟဲ့ ကောင်လေး နေစမ်း ဘာဖြစ်တာတုန်း ကြောက်လုိ့ဗျ ဟားဟား xxxxxx ကြောက်ပါလား ဘာကြောက်စရာ ရှိလို့တုန်း လွှတ်စမ်း ငါလက်မှတ်ထိုးရမယ်၊ နှစ်ရစ်နဲ့ ထောင်အကြပ် တစ်ယောက်က ကိုကိုကြီးကို အလေးပြုပြီး လူဝင်လူထွက် စာရင်းမှာ လက်မှတ် ထိုးစေပါတယ်၊ ကျွန်တော်လဲ ထိုးခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူနာပြုလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်၊ လာရသည့်အကြောင်း ကိစ္စဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဆေးကုသဆိုပြီး ထည့်လိုက်ပါတယ်၊ နောက် ဆရာကိုငွေစိုး လက်မှတ်ထိုးပါတယ်၊ ပြီးတာနဲ့ ထောင်ကြပ်ဟာ စာအုပ်ပိုက်ပြီး ရှေ့ကသွားပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က နောက်ကလိုက်ပါတယ်၊ အခန်းတစ်ခန်းရှေ့မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ မတ်တပ်ရပ်နေရပြီး ၊ ထောင်ကြပ်ဟာ အခန်းထဲဝင်သွားပါတယ် ။
အခန်းဝမှာ ရေးထားတဲ့ စာတန်းလေးက “ဒုထောင်ပိုင်” ရုံးခန်းလို့ ရေးထားပါတယ်၊ နောက်တစ်ခန်း “ထောင်ပိုင်ကြီး” နောက်တစ်ခန်း “ဒုထောင်မှူး” နောက်တစ်ခန်း “ထောင်မှူးကြီး”၊“ထောင်မှူးကြီး” အခန်းမှာ ထောင်ကြပ်ကြီးက စာအုပ်ယူပြီး ၀င်သွားပြန်ပါတယ်၊ သူပြန်ထွက်လာတော့ ထောင်မှူးကြီးပါ ပါလာပြီး ပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ ဆရာကြီး ဒီက လေးက ဟောက်စ် ဆင်းနေတာလား၊ မဟုတ်ဘူး ထောင်မှူးရဲ့ ကျွန်တော့်ညီ အိမ်တော်ဝန် ဖျားနေလို့ ညီလေးကို ပေါ်တာ ဆွဲလာတာ၊ ဟားဟား ကောင်းပါလေ့ဗျာ ကဲဆရာ ဆက်လုပ်စရာ ရှိတာ လုပ်လိုက်အုံး၊ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်လိုက်အုံးမယ် နောက်အပတ် လောက်ဆိုရင် ဆရာ လာစရာ မလိုတော့ လောက်ဘူးဗျ၊ အထက်က ဒီမှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ချပေးမယ်လို့ အော်ဒါ ထွက်လာပြီ၊ ဟုတ်လား ကောင်းတာပေါ့ ထောင်မှူးကြီးရယ်။
ကျွန်တော်တို့ ထောင်ကြပ် ခေါ်လာတဲ့ နေရာကို ရောက်ပါပြီ၊ မိန်းဂျေးလို့ ခေါ်တဲ့ ဗဟိုထောင်ကြီးရဲ့ အောက်ဆုံးအထပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီအထဲမ၀င်ခင် ကျွန်တော်တို့တွေကို တစ်ရစ်နဲ့ ထောင်ကြပ်တစ်ယောက်နဲ့ သုံးရစ် ထောင်ကြပ်ကြီးတို့က အ၀တ်အစားတွေကို ဆောင်းဘောက် စပီကာ နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ သံလိုက်အ၀ိုင်းကြီးတွေနဲ့ လိုက်ကပ်ပြီး စစ်ပါတယ်၊ အဓိပ္ပါယ်က ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဓားတို့ ဓားမြောင်တို့ ဘရိတ်ဓား စတာတွေ ပါလာမှာ ဆိုးလို့လို့ဆိုပါတယ်၊ ဂျုတီကုတ်ကို ချွတ်ပေးလိုက်ရပြီး၊ အသံဖမ်းစက် ဘာညာတွေ ပါမှာဆိုးလို့ တစ်ယောက်ချင်း စစ်ဆေးပါတယ်၊ အားလုံး စစ်ပြီးပြီဆိုမှ ထိုအဆောင်လေးထဲကို ကျွန်တော်တို့ ၀င်ခွင့်ရပါတယ်၊ အခုဆေးကုသမဲ့ နေရာကတော့ ထောင်မကြီးရဲ့ အဆောင်တစ် အောက်ထပ်က အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်၊ ကုတင်ပုလေး တစ်လုံးမှာ ဂုန်နီအိတ်ခင်းထားပါတယ်။
ဆေးခန်းအသေးစားလေးလို ဆေးထည့် ဘီဒိုပုလေးတစ်ခု၊ ဒွစ်ချိပ်တဲ့ စင်တစ်ခ၊ု မီးအိမ်တစ်ခု မီးချောင်းနှစ်ချောင်း၊ ဒန်ဇလုံတစ်ခု၊ ရေဘုံဘိုင်ခေါင်းနဲ့ ဘေလ်စင်တစ်ခ၊ု ထိုင်စရာ ခုံသုံးလုံး ၊ စားပွဲတစ်ခုနဲ့ နဲ့ စားပွဲနဲ့ ထိုင်ရမဲ့ ခုံတစ်လုံး ဒါအကုန်ပါဘဲ၊ ထောင်ဆိုပေမဲ့ အပြင်ဆေးခန်းလေး တွေလိုဘဲ သပ်ရပ်လှပါတယ်၊ လေကောင်း လေသန့်လေးလဲရပါတယ်။ အားလုံး ဆေးအိတ်ကို ခုံပေါ်တင်ပြီး ကျွန်တော်က ခုံတစ်လုံးမှာ ထိုင၊် ဆရာကိုငွေစိုးက ထောင်ကပေးတဲ့ ဆေးဘုတ် (ထောင်လူနာမှတ်တမ်း)မှာ ယနေ့ ဆေးကုသခွင့်ရသည့် လူနာတွေရဲ့ အရေအတွက်ကို ကိုကိုကြီးကို ပြောလိုက်ပါတယ်၊ ဆရာကြီး ၃၉ ယောက်ဗျာ၊ အင်း ။
အပြင်တံခါးဝမှာတော့ ထောင်ကြပ်နှစ်ယောက် အပြာဝတ် ဒါဗာယာလို့ခေါ်တဲ့ ဆေးခန်းအုပ်ချုပ် တာဝန်ကျ ထောင်သား တစ်ယောက်က သတိအနေထားနဲ့ ရပ်နေကြပါတယ်၊ ဗာယာဆိုတာ တန်းစီးလိုဟာနဲ့ တူပါတယ်၊ ရေကန်မှာ အုပ်ချုပ်ဖို့တာဝန်ကျသူကို ရေကန်ဗာယာလို့ ခေါ်ပါတယ်၊ စိုက်ခင်းအုပ်ချုပ်ဖို့ တာဝန်ကျသူကတော့ စိုက်ခင်းဗာယာပေါ့ သူတို့လဲ ထောင်သားတွေပါဘဲ၊ မကြာခင် ကိုကိုကြီးက အကြပ်ကြီး စမယ်ဗျို့လို့ တာဝန်ကျနေတဲ့ ထောင်ကြပ်ကြီးကို လှမ်းပြောလိုက်ပါတော့တယ် ။
ဒေါင် ဒေါင် ဒေါင် ………….အဆောင်တစ်.“ဘုတ်တိုက်ပြီး လူနာ၃၉ ဆေးစစ်ဖို့ပြင် ” အဆောင်နှစ် “ဘုတ်တိုက်ပြီး လူနာ၃၉ ဆေးစစ်ဖို့ပြင် ” အဆောင်သုံး“ဘုတ်တိုက်ပြီး လူနာ၃၉ ဆေးစစ်ဖို့ပြင် ”အဆောင်လေး“ ဘုတ်တိုက်ပြီး လူနာ၃၉ ဆေးစစ်ဖို့ပြင် ” ဆေးခန်းအရှေ့က ခုနက ဆေးခန်း ဗာယာမှ စပြီးအော်လိုက်ပြီး တစ်ဆင့်တစ်ဆင့် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ တစ်ထောင်လုံး ထိုအသံကြီးများ ဖြင့် လွှမ်းမိုးသွားပါတော့၏။ ၁၀မိနစ်လောက် အကြာမှာ လူနာ ၃၉ ဦးအပြင် သူ့တို့ရဲ့ တန်းစီးများ တန်းစီးဆိုတာ ဒီနေရာမှာ နှစ်မျိုးတွေ့ပါတယ်၊ တန်းစီးကြီး ၁၂မှတ် ဗာယာ လို့ခေါ်ပါတယ်၊ တန်းစီးငယ်ကတော့ ရှစ်မှတ် ဗာယာလို့ခေါ်ပါတယ်။
တန်းစီးနှစ်ဦးအပြင် ဘုတ်ကိုင် ဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်၊ ခေါင်းဆောင်ပါ ထမင်းစားတဲ့ကိစ္စမှာ ဝေခြမ်းပေးရသူကို ထမင်းဘုတ်၊ မိလ္လာ သွန်ဖို့ တာဝန်ခွဲပေးရတဲ့သူကို မိလ္လာဘုတ် ခေါ်ပါတယ်၊ ဆေးစစ်ဖို့ ကြီးကြပ်ပေးသူကို ဆေးဘုတ် စသဖြင့် ဘုတ်မျိုးစုံ ရှိပါတယ်၊ အကျဉ်းထောင် အတွင်းမှာ လူနာတိုင်း ဆေးကုသခွင့်ရ သည်မဟုတ်ပါ၊ ဘယ်လောက် အသဲအသန် ဖြစ်နေနေ ဘုတ်ကိုင်တဲ့ လူကို လာဘ်ထိုးရပါတယ်၊ အဲလူတွေက သူ့တို့ဘုတ်မှာ မှတ်ပြီး၊ ဆေးခန်းဗာယာကိုပြ ဆေးခန်းဗာယာကနေ ထောင်ပိုင်ကိုပြ ထောင်ပိုင် ကနေမှ တစ်ဆင့် ထောင်မှူးကြီးဆီကို တင်ပြပြီး အထက် အဆင့်ဆင့်က လက်မှတ်ထိုး လိုက်မှသာလျှင် ယခုလိုဆေးကုသခွင့်ရကြပါတယ် ။
တန်းစီးကြီးနဲ့ တန်းစီးငယ်ဆိုတာက တန်းစီးကြီးဆိုတာ ဆိုင်ရာအဆောင်တစ်ခုလုံးရဲ့ နှစ်ကြီးသမား ထောင်ဝါရင့်ကိုခေါ်တာပါ၊ ထောင်အတွင်းမှာ သူ့သြဇာဟာ ဘုရင်ခံ အနေအထားလောက် ရှိပါတယ်၊ တန်းစီးငယ်ကတော့ သူနေထိုင်တဲ့ အဆောင်မှာ အကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ပါ နှစ်ကြီး နှစ်ငယ်နဲ့ မဆိုင်ပါ ထောင်လက်ကောက်လို့ ထောင်အခေါ်နဲ့ ခေါ်ကြပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကတော့ ၈မှတ်ဗာယာ၊ ၁၂မှတ်ဗာယာ၊ သူတို့အထက်မှာ သန္ဓေဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်၊ သန္ဓေရဲ့အထက်မှာ ၆ထောင်ပိုင်၊ သူ့အထက်မှာ ဂွင်းနီး ဆိုတာရှိပါသေးတယ် နာမည်အရင်းက ကွင်းနီပါ ကွင်းအနီကြီးကို လည်ပင်းမှာ စွပ်ထားရလို့ပါ သူ့ရာထူးက ထောင်ကြပ်ချုပ်ကြီးလို့ ခေါ်ပါ တယ်၊ ဒါကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပါ ဒီခေတ်မှာတော့ ရှိလားမရှိလား မသိပါဘူး၊ ကျွန်တော်ကတော့ တန်းစီး ဘုတ်ကိုင် ဗာယာ ဆိုတာတွေကိုဘဲမြင်ခဲ့ရပါတယ် ထောင်အာဏာပိုင် အားလုံးကတော့ နံပါတ်ဒုတ်ကို ကိုင်ရပါတယ်၊ တန်းစီးတွေ ဘုတ်ကိုင်တွေမှာ ကိုင်ခွင့်မရှိပါ၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတော့ ဂွင်းနီကြီးတွေ ဒုတ်ကိုင်ရပါတယ်၊ ဒါတွေကတော့ ဆရာကြီး ဒဂုံရွှေမျှားရဲ့ “ထောင်မင်းသား ဦးဖိုးထော်” စာအုပ်နဲ့ ထောင်မှူးကြီးငြိမ်း စာရေးဆရာ ရန်အောင်မောင်မောင်ရဲ့ “ထောင်တစ်သက် အတွေ့အကြုံစာအုပ်” တွေထဲက ထောင်ဗဟုသုတ တချို့ကို ထည့်ရေးလိုက်တာပါ ။
အင်္ဂလိပ်မင်း လက်ထက်မှာ ထောင်တွေဟာ အင်မတန်စနစ်ကျပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးသမား တွေအတွက် အေကလပ်၊ ဘီကလပ် စသဖြင့် ထားပေးထားပါတယ်၊ ထောင်ဆရာဝန် ဟူပြီး သီးသန့်ရှိပါတယ် ၁၉၆၂ခုနှစ် တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်လာပြီး နောက်ပိုင်း ကလပ်တွေအကုန် ဖြုတ်လိုက်ပါတယ် ထောင်ဆရာဝန် ဟူ၍ သီသန့်မရှိဘဲ မြို့နယ် ခရိုင်စသဖြင့် ထောင်ရှိရာ မြို့နယ်တွေမှာ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်တွေနဲ့သာ အများအားဖြင့် ကုသပေးပါတယ် ။
ဆေးဘုတ်ကိုင် ထောင်သား အခန်းထဲကို ၀င်လာပါတယ် ဆရာကိုငွေစိုးကို ဆေးဘုတ်ပြပါတယ် ဆေးဘုတ်ထဲက အစဉ်လိုက် အတိုင်းခေါ်ယူ ကုသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုကိုကြီးက ဆေးဘုတ်ကိုင် ကို အပြင်ထွက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်၊ ထိုလူက အပြင်ထွက်ပြီး အော်ပါတယ်၊ အော်တာမှ အစုံပါ အမည် အေးကို အဖ ဘယ်သူ၊ လူမျိုး၊ ပြစ်မှု၊ ထောင်သက်၊ အမှုစီရင်လိုက်တဲ့ရုံး စသဖြင့် စုံစုံ စိစိ အော်ပြီးမှ ဆေးကုသခံရမဲ့ ထောင်သားက ရောက်လာပါတယ်၊ ကုတင်ပေါ်တက် ဆေးကုသရပါတယ်၊ ဆေးကုခံရမဲ့ ထောင်သားတွေဟာ အပြင်မှာ တရားထိုင်သလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ထောင်ပုံစံ ထိုင်နေရပါတယ်၊ တချို့လူနာ အကျဉ်းသားတွေဟာ ခြေထောက်မှာ ခြေကျင်းကြီးတွေပါပါတယ်၊ ထိုင်လို့မရပါ၊ မတ်တပ်ရပ်နေရပါတယ်၊ ခြေကျင်းမှာ ဒေါက်တွေပါပါတယ်၊ ဒေါက်တွေကို ခါးမှာ ချီထားတဲ့ကြိုးနဲ့ ချိပ်ဆက်ထားလို့မို့ ခြေကျင်းဝတ်ထားရတဲ့ အကျဉ်းသားအားလုံးဟာ ထိုင်လို့မရပဲ အိပ်ရင်လဲ မတ်တပ်ရပ်သာ အိပ်လို့ရပါတယ် ။
ပထမလူနာ ဆေးတစ်လုံးထိုးလိုက်ပါတယ်၊ နောက်လူနာ ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်နဲ့ပါ ချောင်းကို သလိပ်မရဘဲ ဆိုးနေတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ၊ ကိုကိုကြီးက “ဘာဖြစ်သလဲ ” ချောင်းတအားဆိုးပါတယ် ခင်မျ၊ ကြာပြီလား တစ်လကျော်ပါပြီ၊ သွေးပါလား၊ ပါပါတယ်၊ ဆေးလိပ်သောက်လား အရင်က သောက်ပါတယ် အခုသောက်စရာမရှိလို့ သောက်လို့မရတော့ပါဘူး၊ ဘယ်အချိန်က စပြီး ချောင်းဆိုးတယ်လို့ မှတ်မှိသလဲ၊ ဟုတ်ကဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က ဆေးလိပ်သောက်ရင်း ကနေစပြီး ချောင်းဆိုးတာပါ ၊ ဘာဆေးလိပ်လဲ၊ ဟုတ်ကဲ့ ပြောရမှာ ခက်ပါတယ်၊။
အလုပ်လုပ်ရင်း ဆေးလိပ်တို နှစ်ခုတွေ့လို့ကောက်လာပါတယ်၊ အဆောင်ပြန်ရောက်တော့ အထဲကပါတဲ့ ဆေးသားလေးတွေကို ထုတ်ယူပြီး သနပ်ဖက်ကို ရေခွက်ထဲထည့်ပြီး နူးပါတယ်၊ ပြီးတော့ ဖက်လေးကို လေသလပ်ခံပြီး ခုနက ထုတ်ထားတဲ့ ဆေးသားလေးတွေနဲ့ ဆေးလိပ် သေးသေးလေးတွေ လိပ်သောက်ပါတယ် စုစုပေါင်း လက်မလောက်ရှိတဲ့ ဆေးလိပ်လေး နှစ်ခုရပါတယ်၊ အဲဒီညကနေ စချောင်းဆိုးပါတယ်၊ ကျွန်တော် ဘေးကနားထောင်နေရင်း တော်တော် စိတ်ဆင်းရဲမှိပါတယ် တကယ့်လူငရဲဘဲ လို့တွေး မှိပါတယ်။
ခင်များ အပြင်မှာ မိသားစု ရှိလား၊ မရှိပါဘူး ဆရာကြီး၊ ဒါဆိုထောင်ဝင်စာ မရဘူးပေါ့၊ ဟုတ်ကဲ့ မရပါဘူးခင်မျာ၊ ဘာစားချင်သလဲ ကျုပ်ရေးပေးလိုက်မယ်၊ အမဲသားပါ ဆရာကြီး၊ အေး ဒီစာယူပြီး ဆေးဘုတ်ကိုပြလိုက်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါနဲ့ ဆေးလိပ်က သောက်ချင်သေးတာလား၊ ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲ ဆရာကြီးရယ်၊ အစာစားပြီးတိုင်း ခံတွင်းချဉ်လိုက်တာ ဆိုတာ ပါးတွေတောင် တောင်ပါတယ် ဆရာကြီးရယ်၊ ကိုကိုကြီး ဘေးဘီကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ကို လာဖို့ မျက်ရိတ်ပြလိုက်ပါတယ် ၊ စက္ကူတွေပေး၊ ကျွန်တော် ခုနစက္ကူထုတ်လေးကို ဆေးအိပ်နား ချပေးလိုက်ပါတယ်၊ အဲဒီထဲက စက္ကူဖြတ်စ တစ်ထပ်ကို ထောင်သားကြီးရဲ့ ခါးကို ကျစ်ပေးလိုက်ပါတယ် သူ့အိတ်ထဲက ဆေးပြင်းလိပ်တိုလေးတွေ သုံးလေးခုကိုလဲ ခါးမှာ မသိမသာလေး ကျစ်ပေးလိုက် ပါတယ်၊ ထိုလူနာ စကားပြန်မပြောပါ မျက်လုံးတွေက တအား ကျေးဇူးတင်နေပုံပါ ။
ဖိုးနီ၊ သူကတော့ ခြေထောက်မှာ ခြေကျင်းကြီးနဲ့ပါ လာပုံကိုက စမ်းစမ်းနဲ့၊ ဘာဖြစ်သလဲ မျက်စိတွေ ၀ါးလာပါတယ် ဆရာကြီ ၊ အင်း ကြာပြီလား ဟုတ်ကဲ့ ကြာပါပြီ၊ နောက်ဆုံး အဖြေကတော့ ခြေထောက်မှာ တပ်ထားတဲ့ သံခြေကျင်းကြီးကနေ ခြေထောက်ပတ်လည် စားပြီး သံဆိပ်တက်ပြီး မျက်စိ ကွယ်လုကွယ်ခင် ဖြစ်နေတာပါ၊ ကိုကိုကြီးက ပြင်ပဆေးရုံမှာ ဆေးကုသခံယူဖို့ ဆေးဘုတ်ကို ခေါ်ပြီး လက်မှတ် ထိုးပေးလိုက်ပါတယ် ၊ ဆေးတစ်လုံးထိုးပြီး ပေးလိုက်တာလဲ တွေ့ပါတယ် ။
နောက်တစ်ယောက် ဦးကြည်မောင် အသက်၅၀ကျော် အဘိုးကြီးပါ တစ်ခေါင်းလုံးဖွေးဖွေး ဖြုနေပါပြီ၊ ဘာဖြစ်သလဲ မူးတယ်ဆရာ တောင်ယာထဲမှာ ပြစ်ပြစ်လဲတာ ၁၀ခါ မကတော့ဘူး၊ သွေးတိုးရှိသလား ရှိပါတယ်၊ သွေးပေါင်ချိန်လိုက်တော့ သွေးတိုးနေပါတယ် ထောင်အစားအစာတွေနဲ့ မတည့်တာတွေလဲ ပါမယ်နဲ့တူပါတယ်၊ ထောင်ဆိုတာက ငါးပိငါးခြောက် တအားစားတဲ့ နေရာမို့လား၊ ဆေးတစ်လုံးထိုးပြီး ဆေး ပေးနေတာကို တွေ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိဘဲ အိတ်ထဲက နို့ဝေဖာတွေကို ထုတ်စားနေမှိပါတယ်၊ အဘိုးကြီးက အနံမွှေးလို့လားမသိဘူး၊ ကျွန်တော်ဘက်ကိုဘဲ ခေါင်းငဲ့ငဲ့လာပါတယ်၊ တံထွေးကိုလဲ မကြာမကြာ မျိုချပါတယ်၊ ကျွန်တော်က အဘ စားချင်လို့လား၊ အေးစားချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ၊ ကိုကိုကြီးက တားရမှာလဲ အားနာတယ်ထင်ပါတယ်၊ ကောင်လေး လျှောက်မလုပ်နဲ့ကွ သူတို့မှာ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူး အပြင်ရောက်ရင် တန်းစီးက ကစ်လိမ့်မယ်၊ ကိုကိုရယ် သနားပါတယ် ကျွေးလိုက်မယ်လေ၊ နေအုံး ဆိုပြီး၊ အဘိုးကြီးကို တံခါးကိုကြောပေးခိုင်း လိုက်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်က အဘိုးကြီး မျက်နှာ ရှေ့ကနေရပါတယ်၊ ကိုကိုက နားကြပ်နဲ့ ကျောထောက်လိုက် ဟိုထောက်လိုက် ဒီထောက်လိုက်နဲ့ အယောင်ပြပေးနေပါတယ်၊ ကျွန်တော်က အဘိုးကြီးကိုမုန့်ခွံ့ကျွေးပြီး ရေတိုက်ရပါတယ်၊ တော် တော်စားချင်နေပုံ ရပါတယ်၊ ဝေဖာကို မ၀ါးဘဲ မျိုးချတယ်တောင် ထင်မှိပါတယ်၊ အသက်ကကြီးလို့ ဝေဖာဟာ ပါးစပ်ထဲမှာ ခြောက်ခြောက်နေလို့ ရေလေးပါ ကူကူတိုက်ပေးနေရပါတယ်၊ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ၊ ငါ့ဘိုးဘိုးသာ ဆိုရင်လို့ စိတ်ကူးမှိပြီး စိတ်တော်တော်မကောင်း ဖြစ်မှိပါတယ်။
ဒီအသက် ဒီအရွယ် ဟာ ဘုရားကျောင်းကန်မှာ တရားထိုင် ပုတီးစိပ်နဲ့ ဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်း နေရမဲ့ အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့၊ အကုသိုလ်ကြောင့် လူ့ငရဲမှာ ၀ဋ်ခံနေရတာဟာ ရင်ထဲမချိစရာပါ၊ သူလဲ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တယ်လို့ ဆိုသမို့ ထုံးစံအတိုင်း ဆေးပြင်းလိပ် အတိုလေးတွေနဲ့ စက္ကူလေး တစ်ထပ် ကျစ်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ လူနာအားလုံးဟာ လူရုပ်လူသဏ္ဍာန် မပီပြင်ကြတော့ပါ၊ တွေ့လိုက်ရရင် လူတွေအားလုံးဟာ ငတ်မွတ်ပြီးနေတဲ့ လူတွေလိုပါဘဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ညီအကို နဲ့ ဆရာကိုငွေစိုး၊ လာတုန်းက အတိုင်း အစစ်ဆေးခံ လက်မှတ်ထိုးပြီး ပြန်ထွက်လာပြီး ၊ အကျဉ်းဦးစီးက ကားနဲ့ ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့၊ ကိုကိုက ဘာလို့ ချောင်းဆိုးတဲ့ လူကိုဆေးလိပ်ပေးရတာတုန်း ချောင်းပိုဆိုးနေရင် ခက်မကုန်ဘူးလား၊ ငါဆရာဝန် ပါကောင်လေးရာ သိပါတယ်၊ ငါကသူ့တို့ကို သောက်စေချင်လို့ ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟ ထောင်ထဲမှာ ဆေးလိပ်ရှိရင်၊ အကုန်ဖြစ်တယ်ကွာ မသောက်တဲ့ လူတွေလဲ သောက်တယ်လို့ ငါ့ကို ညာပြောနေတာ ငါသိတာပေါ့၊ ငါဘာလို့ပေးလိုက်လဲ သိလား၊ ဘာလို့တုန်း ရောဂါသည်တွေက ညဘက် ညောင်းရင် ဆေးလိပ်တိုက်ပြီး အနင်းခံနိုင်တယ်လေ၊ အနှိပ်လဲခံနိုင်တယ် အဲလိုလေး တွေးပြီး ပေးလိုက်တာကွ၊ ဒီလိုမှန်း အစကသိရင် ကိုကိုရာ ကျားပျံမကောက် ဆေးလိပ်ကြီးတွေ အစည်းလိုက် ၀ယ်သွားတာပေါ့၊ အေးပေါ့ ဒါမှ ဒို့ညီအကိုနှစ်ယောက် ထောင်အတူတူကျမှာ ထောင်ဥပဒေမှာ အပြင်ကဘာမှ သွင်းခွင့်မရှိဘူးကွ၊ ထောင်ဝင်စာတောင် အစားအစာလောက် လက်ခံတာ ။ အရင်တုန်းက ဆရာကြီးသိန်းဖေမြင့်တို့ ထောင်ထဲကနေ ထမင်းချိုင့် အပြင်မှာ ဆွဲစားတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ခေတ်တွေအဆက်ဆက် ပြောင်းခဲ့ပေမဲ့ လူသား အပြစ်ထောင် ဆိုတာတွေဟာ သံသရာ လည်နေအုံးမှာတော့ အမှန်ပါ၊ အရင်က ထောင်တွေထဲမှာ ညရောက်ပြီ ဆိုရင် တာဝန်ကျ စန္ဒရီဗာယာ များက ၁၅မိနစ် တစ်ခါ “အားလုံးကောင်းပါသည်ဗျား” လို့ ထောင်တိုင်း မှာ ညတိုင်း ညတိုင်း အော်ရပါသတဲ့ ၊ ကုလား စန္ဒရီများက ALL Well ဆပ် လို့ အော်ပါသတဲ့ ဆပ်ဆိုတာကတော့ ကုလားစကား ခင်များ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ “အားလုံး ကောင်းပါသည်ဗျား” ၁၈၉၄ခုနှစ်ကတည်းက ရေးသားခဲ့တဲ့ အကျဉ်း ထောင်ဥပဒေ Burma Jail Mannual ဟာ နှစ်ပေါင်းရာကျော် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ထောင်ထဲက ညဘက်အော်သလို အကျဉ်းအသီးသီး ထောင်အသွယ်သွယ်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ထောင်သား ထောင်သူများ အရပ်ထဲကို ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ “အားလုံးကောင်းပါသည်”လို့ ဖြစ်သွားကြတာများ ဘယ်နှစ်ဦးလောက် တွေ့ဖူးလေသလဲကွယ်တို့…………။ ဟိုကြေငြာလေးထဲကလို တိုးလို့ တိုးလို့ တိုးလို့ သာပင် ဆိုးနေကြသည် မဟုတ်ပါလော ………….။
စာရှုသူအပေါင်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ငွေလမင်းတို့က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
Posted by ငွေလမင်း at 9:54 PM 13 comments
မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ သက်တော်၈၀ ၊ ၀ါတော် ၄၅ ဖြင့် သတ္တ၀ါတို့အား တရားဓမ္မ ဟောကြားချေချွတ်တော် မူခဲ့ပါတယ် ၊ ဘုရား အဖြစ်နဲ့ နှစ်ပေါင်း၄၅ နှစ်ကို တနေရာတည်း ဖြင့် နေခဲ့တာမဟုတ်ပါ ၊ ကျွတ်ထိုက်တဲ့ ဝေနေယျများ ရှိရာ အရပ်သို့ အမြဲကြွချီနေသမို့ နေရာအတည်တကျ မရှိပါ ၊ သို့သော်လည်း သာဝတ္ထိပြည်မှာတော့ အများအား ဖြင့် သီတင်းသုံးတော်မူပါတယ် ၊ ၀ါတော်စဉ်တေးထပ်ဆိုတာ ဘယ်နှစ်ဝါမြောက်မှာ ဘယ်အရပ်မှာ သီတင်း သုံးခဲ့ တယ်ဆိုတာကို ရှေးပါဠိစာပေ ကျွမ်းကျင် နိုင်နင်း တော်မူသော အရှင်သူမြတ်များက ပိဋကစာပေ တို့မှ မွေနှောက်ပြီး တေးထပ်ကဗျာများ ရေးစပ် သီကုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ၊ ထိုတေးထပ်ကဗျာများကို ၀ါတော်စဉ် တေးထပ်လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
ပြောစမှတ် စာဆိုတင်မည် ၊
မိကဒါ ဟောကပ်ရှေ့ဖျား ။
(ပဌမ၀ါကို မိကဒါဝုန်တော မှာ ၀ါကယ်တော်မူသည် )
ဒု+တ+စ ရာစဂြိုလ် ၊
ဝေသာလီ ပြည်အပါး ၊
ငါးဝါမြောက် ဘုန်းကြွယ် ။
မကုဋာ တောင်ဂီရိ ၊
ခြောက်ဝါရှိ ကိန်းဝပ်စံပယ် ။
(ဒုတိယ +တတိယ + စတုတ္ထ ၀ါများကို ရာဇဂြိုလ်ပြည်တွင် ၀ါဆိုတော်မူပြီး ၊ ငါးဝါမြောက်တွင် ဝေသာလီပြည်တွင် ၀ါဆိုတော်မူသည် ၊ ၆၀ါမြောက်တွင် မကုဋာဂီရိ တောင်တွင် ၀ါကပ်တော်မူ၏ ။ )
နောင်ခါသိ ထိမ်းမှတ်လွယ်အောင် ၊
ကိန်းသပ္ပာယ် ညွန်းရစ်တော့ ။
မြန်းကြွ ကပ်ရှာ ။
ရှစ်ဝါမြောက် စံတုကွာမှာ ၊
သံသုမာ ဂီရိပလေး ။
(၇ ၀ါမြောက်ဝါကို တာဝတိံသာ နတ်ပြည်တွင် မယ်တော်သန္တုဿိတ နတ်သားအား အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်မြတ် ဟောကြာတော်မူပြီး ၀ါကပ်တော်မူ၍ ၊ ၈ ၀ါမြောက်ကို သံသုမာဂီင်္ရိ ထောင်ထိပ်မှာ ၀ါကပ်တော်မူသည် )
ကောသဗ္ဗီ ကိုးဝါရ ၊
စိုးနာထ မှီထိုင် ။
ဖြိုးသာလှ ပုလဲမြိုင်မှာ ၊
အပြီးပိုင် တစ်ဆယ်ကူး ။
ဗြဟ္မဏ နာဠရွာမှာ ၊
၀ါကြွတာ ဆယ့်တစ်ရခူး ။
(၉၀ါမြောက်ကို ကောသဗ္ဗီပြည်တွင် ၀ါဆိုတော်မူပြီး ၊ ၁၀ ၀ါမြောက်ဝါကို ပလလဲတောမှာ ၀ါဆိုတော်မူသည် ၊ ၁၁ ၀ါမြောက်ကို ဗြဟ္မဏ နာဠရွာတွင် ၀ါဆိုတော်မူပါ၏ ။)
တစ်ဆယ့်နှစ် နေလျှင်ဝါ ၊
ဝေရဉ္စာ ပြည်ထူး ။
တောင်ဇာလီ မြတ်ဦးမှာတော့ ၊
ဆယ့်သုံးကျုး ၀ါတော် ။
ဆယ့်လေးကြိမ် ဇေတ၀န ၊
ကပိလ ဆယ့်ငါးဝါခေါ် ။
(၁၂ ၀ါမြောက်ကို ဝေရဉ္စာ ပြည်မှာ ၀ါကပ်တော်မူပြီး ၊ ၁၃၀ါ မြောက်ကို ဇာလိယတောင် (စာလိယ တောင်ဟုလဲ ခေါ်သည် )တွင်ဝါကပ်တော်မူပါတယ် ၊ ၁၄၀ါမြောက်မှာတော့ ဇေတ၀န်ရွှေကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးတော်မူပြီး ၊ ၁၅ ၀ါမှာတော့ ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ရဲ့ ကပိလ၀တ် နေပြည်တော်မှာ သီတင်းသုံး တော်မူခဲ့ပါ၏ ။)
အာဠ၀ီ ဆယ့်ခြောက်ကျော်မှာ ၊
စက်ရောက်ပျော် ပြန်လှန်းလို့ ။
စံမြန်းသည့် ရာဇဂြိုလ် ၊
ဆယ့်ရှစ်နှင့် ဆယ့်ကိုးအလိုမှာ ၊
ဇာလီဆို တောင်ထိပ်ပလေး ။
(၁၆၀ါမြောက် ၀ါတော်ကို အာဠ၀ီပြည်မှာ ကပ်တော်မူပြီး ၊ ၁၇ ၀ါမြောက်မှာတော့ ရာဇဂြိုလ်ပြည်မှာ ပြန်လည် သီတင်းသုံးတော်မူပါတယ် ၊ ၁၈ ၀ါ ၁၉၀ါ တို့ကိုတော့ ဇာလိယတောင်မှာ ပြန်လည်ကြွချီသီတင်း သုံးတော်မူပါ၏ ။ )
ရာဇဂြိုလ် တသွယ်ထည့် ၊
နှစ်ဆယ်ပြည့် ၀ါအကြိမ် ။
နယ်မလှည့် မာရဇိန်မှာ ၊
ဇရာနှိမ် အိုရွမ်း ။
နှစ်ဆယ့်လေး သာဝတ္ထီမှာ ၊
၀ါကျွတ်မှီ လှည့်ပတ်စံမြန်း ။
(၂၀၀ါမြောက်မှာ ရာဇဂြိုလ်ပြည်တွင် သီတင်းသုံးတော်မူပြီး ၊၂၁၀ါမြောက်မှ ၄၄၀ါထိ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းနှင့် ၀ိသာခါ ကျောင်းအမကြီး၏ ဗုဗ္ဗာရုံကျောင်းတိုက်တို့တွင်၂၄၀ါတိုင်တိုင် သီတင်းသုံး ၀ါဆိုတော်မူပြီး)
အန္တိမ နေမှုဝါ ၊
ဝေဠုရွာ တစ်ခန်း ။
အာယုတော် ဇီဝိန်နွမ်းပြီးမို့ ၊
ရည်ချိန်မှန်း စဉ်လာ ။
မြတ်ဝါဆို လေးဆယ်ငါးတွင်မှ ၊
အေးနယ်သွား မြန်းကြွခေမာ ။
(၄၅ငါးဝါတွင် မလ္လာမင်းတို့၏ အင်ကြင်းဥယျာဉ်အနီး ဝေဠုဝ ရွာလေးတွင် နောက်ဆုံးဝါကပ်တော်မူပြီး ပရိနိဗ္ဗာန် စံမြန်းတော်မူသည် )
များဝေနေ သံသရာကို ၊
ယဉ်တဖြာ မဂ်နန်းနှင့် ။
ဖြတ်လွှမ်း၍ နိဗ္ဗူခွင် ၊
လှမ်းပို့ ကယ်တင် ။
ဘုရားမြတ် ၀ါဆိုစဉ်ကို ၊
စာလိုချင် မှတ်စမ်းတော့လေး ။
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီး ၄၅နှစ်တာကာလ အတွင်း ဋ္ဌာနပေါင်း ၁၅ဋ္ဌာန ကျောင်းပေါင်း ၁၆ကျောင်း ၀ါပေါင်း ၄၅၀ါ သီတင်းသုံးတော် မူသွားပါကြောင်း ကိုရှေးပညာရှိ ကဗျာ့က၀ိများ ကရေးသားသွားသော ၀ါတော်စဉ်တေးထပ်ကို မှတ်သားမှိသမျှ ၊ ဗဟုသုတ အလို့ငှာ ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါသည် ။
၀ါတော်စဉ်တေးထပ်များဟာ စုစုပေါင်း ခြောက်ပုဒ်ရှိပါတယ် ၊ ကျွန်တော်ထံမှာလဲ ခြောက်ပုဒ်လုံး ရှိပါတယ် နောက်ပိုစ့်တွေကျမှ ထပ်မံရေးသားပါ့မယ် ၊ ဒီဝါတော်စဉ်တေးထပ်များကို တေးထပ်သင်စဉ်က ဘိုးဘိုးက နမူနာ တေးထပ်များအဖြစ် သူ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှ ကူးယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ၊ ရေးသားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ထန်းတပင် ဆရာတော်ဟု သိရပါတယ် ၊ ဘွဲတော်က ဦးပညာသာမိ လို့မှတ်မှိပါတယ် ၊ မှားချင်လဲ မှားပါလိမ့် မယ် မကြိန်းသေပါ ၊ ယခုတော့ ပိုစ့်ရှည်သွားမှာ ဆိုးသည့်အတွက် ဤမျှနှင့် နိဂုံးချုပ်ပါတယ် ၊ ဒီတေးထပ်ကို တင်မယ်လို့ လုပ်တော့ မဒမ်ငွေလမင်းက သူ့ဘလော့မှာ စာလာဖတ်တဲ့ လူတွေ မကြိုက်လောက်ဘူး လို့ ပြောပါတယ် ၊ မစ္စတာငွေလမင်းအနေနဲ့ ကတော့ ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ရှားပါးလှတဲ့ စာကောင်းပေမွန်များ ဖြစ်လို့ မျှဝေလိုတဲ့ စေတနာလေးနဲ့ တင်လိုက်ရပါတယ် ၊ မဒမ်ငွေလမင်း ပြောသမျှကို အမြဲတမ်း ကြိတ်မှိတ်သီးခံ နေရသည့် သနားစဖွယ်ဖြစ်သည့် မစ္စတာ ငွေလမင်း ။
Posted by ငွေလမင်း at 2:49 PM5comments
ဥစ္စာစောင့်နှင့် သိုက်နန်းရှင် (၂ )
ဥစ္စာစောင့်နှင့် သိုက်နန်းရှင် (၁) ကို ဒီမှာဖတ်ပါ ......
ဘိုးဘိုး မနေ့ကလေ ဘိုးဘိုးပြောတယ်မလား သိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီး ဆိုတာ သူ့ကိုဘယ်သူက ခန့်တာတုန်း ၊ တရားဝင်ခန့်တာလား ဆွဲခန့်လား ၊ အိုး တရားဝင်ခန့်တာပေါ့ကွယ် ၊ သိုက်ချုပ်ဘိုး တော်ကြီးကို ၊ ကမ္ဘာရဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်းကို စောင့်ရှောက်တော်မူတဲ့ ၊ ကုဝေရ နတ်မင်းကြီးက ခန့်အပ်ထားတာ သိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီး ဆိုတာလဲ စတုမဟာဇရာဇ် နတ်စာရင်းဝင်တဲ့ နတ်ပါဘဲ ဘာလို့ခန့်အပ်ရသလဲ ဆိုရင် ၊ မနေ့က ပြောခဲ့တယ်လေ ဘုရားတည်ပြီးသွားရင် ကျောင်းတွေ ဆောက်ပြီးသွားရင် ဘုရင်တွေဟာ မြေအတွင်းမှာ အသုံးကံကြွေးချတဲ့အခါ ၊ ထောင်နှစ်ကြီးသမား ကို မင်းတို့ ဒီဥစ္စာတွေကို စောင့့််ရှောက်ကြ ၊ ဘုရားမပြိုမပျက်ခြင်း ကျောင်းမပြိုမပျက်ခြင်း ဘယ် သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ တူးဖော်ယူငင်လို့မရစေနဲ့ ၊ တူးယူသွားတဲ့ လူတွေလဲ ဘုရားကျောင်းကံ စေတီပုထိုး မပြုပြင်ဘဲ စားသောက်သုံးယူခဲ့သော် ၊ ကမ္ဘာမြေရဲ့ သဲလုံးနဲ့ အမျှငရဲမှာခံရပါစေလို့ ကျိန်စာ တိုက်ခဲ့ပြီး ခုနက နှစ်ကြီးသမားတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး အစောင့်ထားခဲ့တယ် ၊အဲဒီ အစောင့်တွေဟာ အစိမ်းသေရတော့ နတ်ပြည်မရောက်နိုင်ဘူးကွယ် မင်းပြစ်မင်းဒဏ်နဲ့ မချိမဆန့် သေရတာဖြစ်လို့ ၊ သူတို့ဟာ အစိမ်းသရဲ ပြိတ္တာကြီးတွေ အဲလိုတွေဖြစ်ပြီး ဒီဥစ္စာတွေကို စောင့်ရတယ် ဘုရင်က စောင့်ဆိုလို့သာ စောင့်ရရှာတယ် သူတို့က ဘာအတွက် ဘယ်အတွက် ဆိုတာ မသိဘူး ဒါကြောင့် သရဲသဘက် ပြိတ္တာ စတာတွေကို နိုင်နင်းတဲ့ အထက်လော်ကီ ပညာဆရာကြီးများက ထိုိုထိုသိုက်တွေကို တူးယူတယ် အဲလိုတူးယူုတော့ ဘုရားစေတီတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာတွေ ဆုံးရှုံးလို့မို့ ၊ စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကြီး ကုဝေရက ထိုထိုသိုက်တွေကို စီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ စာရင်းဇယား လုပ်တဲ့ သိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီးတစ်ပါး ခန့်အပ်လိုက်တယ် ၊ ဒီနေရာမှာ မြေးကို ကျိန်စာ ဆိုတာပြောအုံးမယ် သိင်္ဃာသူ့ သမီးကျောက်စာတို့ ၊ မိဖုရားဖွားစော ကျောက်စာတို့ ၊ ပုဂံမြင်းကပါ အရပ်က မြစေတီကျောက်စာ တို့မှာတောင် “ငါရဲ့ အလှူကို ဖျက်ဆီးသူများ ဘုရားဖူးခွင့် မကြုံရပါစေနဲ့ ၊ ပြုပြင်သူများ သူတို့နဲ့ တူတူ အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးရပါစေ ” စသဖြင့် ရေးသားပြီး ကျောက်စာထိုးခဲ့တယ် ၊ အဲဒါကျိန်စာဘဲကွယ် ၊ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ကျိန်စာတိုက်ခဲ့တာ ။
“ ဘိုးဘိုး ဒါဆိုကျိန်ရင် တကယ်ဖြစ်သလား” ၊ နောက်ပြီးတော့ ခုနက လူသတ်ပြီး အစောင့်ထားခဲ့တဲ့ လူတွေကရော ဥစ္စာစောင့်ဖြစ်သလား ၊ အင်းကျိန်ရင် တကယ်ဖြစ်တယ်လို့ အယူရှိတာပေါ့ ၊ တကယ်ဖြစ်တယ် ဘာလို့လဲ ဆိုရင် ရှေးတုန်းက လူကြီးသူမတွေဟာ သီလ သမာဓိ ပညာ အားလုံးနဲ့ ပြည့်စုံကြတယ် ၊ ဒါကြောင့် သူတို့ပြောတဲ့ ဟာဖြစ်တာပေါ့ ၊ ဘုရင်တွေက ဒီနေရာမှာနေ ဟိုနေရာမှာနေလို့ အမိန့်ချခဲ့ရင် သရဲသဘက်တွေက ဘုရင့်အမိန့်နာခံရတယ်ကွဲ့ ၊ ဘုရင်ဆိုတာ ရေမြေ့သနင်းကွယ် လောကသမ္မုတိရထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၊ တိုင်းပြည်မှာ ဘုရင်ဟာ အာဏာ အကြီးဆုံးဘဲ သူ့တို့ရဲ့ အမိန့်ကို ဘယ်သူမှ လွန်ဆန်လို့ မရဘူး ၊ ငါမြေးကို ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ ပြောပြရအုံးမယ် ၊ ဘိုးဘိုး ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းတုန်းက ဂျပန်စစ်ပြန် အင်္ဂလိပ် စစ်ပြန် ခြေကျိုးလက်ပြတ်တွေအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးလုပ်ဖို့ တာဝန်ပေးလို့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး လုပ်ရတယ် ၊ အဲဒီမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်းထဲက မြေပို မြေလျှံတွေကို ရှင်းရတယ် ၊ အခုကျိုက္ကဆံကွင်းနားဝန်းကျင်က လူကြီးလက် လေးဖက်လောက်ရှိတဲ့ ကုက္ကိုလ်ပင်ကြီး တစ်ပင်ဟာ လှဲဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ် ၊ နှစ်ပရိစ္ဆေဒတွေ ကြာပြီမို့လား ၊ အပင်ကြီးတော့ အစောင့်အရှောက် တွေရှိမှာပေါ့ ၊ အဘိုးက သစ်ပင်ကို လှဲပြီး လမ်းဖောက်ဖို့ ၊ ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တာဝန်ပေးလိုက်တော့ ၊ သစ်ပင်က လှဲလို့မရဘူး ကိုင်းကြီးတွေ ကကြီးတော့ ပင်စည်ကနေ လွှနဲ့တိုက်ချလို့မဖြစ်ဘူး ၊ အပင်ပေါ်တက်ပြီး ကိုင်းတွေ ကို အရင်လွှနဲ့ တိုက်တိုက်ချရတယ် ၊ အဲဒီမှာ လူတွေက အပင်ပေါ် တက်သွား ပြီးရင် လွှတို့ ဓားတို့ ကို အောက်ကနေ ကြိုးနဲ့ လှမ်းယူ ၊ သိပ်မကြာဘူး “အုန်း”ဆို ကန်ချလိုက်တယ် ၊ ရှေးတုန်းက လူတွေက လူပေလူရွှတ်တွေ သိပ်ကြောက်တဲ့ လူတွေလဲမဟုတ်ဘူး ကန်ချလဲ တက်တာဘဲ ၊ ညနေ ရောက်တဲ့ အထိ အပင်ပေါ်တက်လို့မရတာနဲ့ ၊ တာဝန်ရှိသူတွေက အဘိုးကို လာပြော ကြတယ် ၊ ဒီလိုဒီလို ဖြစ်တယ်ပေါ့ ၊ ဒါနဲ့ အဘိုးကလိုက်သွားပြီး အစောင့်တွေ ဘာတွေရှိရင်လဲ ဖယ်ရှားဖို့ ပြောတော့ လူတစ်ယောက်ကို အပင်စောင့်တဲ့ အကောင်က ပူးကပ်ပြီး ၀င်ပြောတယ် ၊ “သတိပေး နေတာကို မရဘူးလား အသေဆိုးနဲ့ သေကုန်မယ် တက်ရဲတက်လာ ကြည့်ခုတ် ရဲခုတ်ကြည့်” လို့ပြောဆိုပြီး ထွက်သွားတယ်ကွယ် အဲဒါနဲ့ ဘိုးဘိုးက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းဆီကို သွားပြီး အမိန့်ပြန်တမ်းတစ်ရွက် တောင်းတယ် ၊ ဒီစာထဲမှာ “ဤအပင်ကို နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်း တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် မကြာခင်ခုတ်လှဲပြစ်မည် ၊ ဆိုင်ရာ အစောင့်အရှောက်များ ၊ သင့်တော်ရာနေကြ အမိန့် စစ်သေနာပတိချုပ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း”ဆိုပြီး စာထုတ်ပြီး သစ်ပင်အောက် သွားဖတ် ရတယ် ၊အဲဒီမှာ အစောင့်ဖြစ်သူက လူကိုပူးပြီး ပြောင်းပေးပါ့မယ် နေရာရှာပေးပါ ဆိုလို့ ငါတို့က မရှာတတ်ဘူး မင်းဘာသာ ရှာဆိုတော့ ၊ အခုကျိုက္ကဆံ ဘုရားဝန်းထဲက စစ်ပင်လို့ခေါ်တဲ့ အပင်ကြီးတစ်ပင်မှာ အစောင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့ အဲဒီအပင်ကို ဘုရားစောင့် နတ်တွေဆီကနေ တောင်းပေးလိုက်ရဖူး တယ်ကွယ် ။
ဒါဆို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သရဲကကြောက်တာပေါ့ ၊ မဟုတ်ဘူး အဲဒီအချိန်ခါက ဗိုလ်ချုပ်ဟာ တိုင်းပြည်မှာ အကြီးအကဲ ဖြစ်နေလို့ သူတို့ကကြောက်တာ လောကသမ္မုတိမင်းဆိုတာ အဲဒါကို ပြောတာ သြဇာအာဏာ ရှိကြတယ် ၊ စောစောက မြေကြီးထဲ ရတနာတွေ ထားခဲ့ပြီး ဒီနေရာမှာ စောင့်ရှောက်ရစ်ကြလို့ အမိန့်ထုတ်ထားခဲ့ရင် အဲဒီအသတ်ခံရတဲ့ လူတွေဟာ အဲဒီနေရာကနေ တခြား ဘယ်မှသွားလာခွင့် မရှိတော့ဘူး အဲဒီဥစ္စာတွေကို မကျွတ်မလွတ်ဘ၀တွေနဲ့ စောင့် ရှောက် နေရတယ် ၊ အဲဒီအစောင့်တွေက သရဲသဘက်ကြီးတွေ ဖြစ်နေတော့ သူတို့ကိုနိုင်တဲ့ အထက်ဆရာတွေ အောက်လမ်းဆရာတွေက သူတို့ကို မလှုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပြီး ၊ ရတနာတွေယူ ကြတယ် ၊ ဒါကြောင့် သာသနာစောင့်နတ်မင်းတွေက ဒီသရဲတွေရဲ့ အထက်မှာ အုပ်ချုပ်ဖို့ တန်ခိုး အနည်းငယ်ရှိတဲ့ နတ်ပြိတ္တာတွေလွှတ်ပြီး အဲဒီအသိုက်တွေမှာ အကြီးအကဲခန့်အပ်ကြတယ် ၊ ခုနက သရဲသဘက်တွေကတော့ အစောင့်အရှောက်ဖြစ်ကုန်တယ် ၊ နတ်မင်းတွေ ခန့်အပ်တဲ့ နတ်ပြိတ္တာ တွေက သိုက်နန်းရှင် ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ သိုက်ရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်သွားတယ် ။ မူလက စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မကျွတ်မလွတ်တွေကတော့ သိုက်ရဲ့ အစောင့်အရှောက်တွေဘဲ ဆက်ဖြစ်တယ်ကွယ်။သိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီးဆိုတာက နတ်မင်းတွေခန့်အပ်တဲ့ သိုက်နန်းရှင်တွေရဲ့ အထက်မှာ စာရင်းဇယား ပြုစုပြီး ဒီသိုက် ဒ်ီသိုက်တွေဟာ သာနာတော်ပိုင် ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ် ဆိုပြီး မှတ်သားထားတယ်။၊ နောက်ပြီး မကြာခဏ လူဝေးရာကို ရွှေ့ပြစ်တယ် ၊ ဒါဟာ သိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီး လုပ်တဲ့အလုပ်ဘဲ ။
ဘိုးဘိုးသိုက်တူးဖူးတယ်နော် ဟုတ်ပ ၊ သိုက်တစ်ခု တူးမယ်ဆိုရင် မြေပုံလိုတယ်မဟုတ်ဘူးလား ၊ မြေပုံမဟုတ်ဘူးကွယ် သိုက်စာပါ ၊ အင်း အဲဒီသိုက်စာကို ဘိုးဘိုးတို့က ဘယ်ကရတုန်း ၊ အင်း ဒါက ဘိုးဘိုးတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးကွယ် ၊ ဘိုးဘိုးတို့က နောက်လိုက် ဘိုးဘိုးရဲ့ ဆရာသမားတွေ ရှိတယ် သူတို့ကဆီမှာ ရှိတာပေါ့ ၊ သူတို့က ဘယ်ကရတုန်း အင်းသိုက်စာ ဆိုတာက တချို့က ပြိုပျက်သွားတဲ့ ဘုရားစေတီတွေထဲက ရတယ်ကွယ် ၊ တချို့ဟာတွေကတော့ သိုက်တူးရင်း သိုက်ထဲက ရတနာတွေအပြင် သိုက်စာတစ်ခုပါ တစ်ပါတည်းရခဲ့တယ်၊ တချို့ကတော့ စကားဟောင်းနဲ့ သိရတယ် ၊ ဘိုးဘိုးရဲ့ဆရာသမားကြီးဟာ ၊ ဦးသိဒ္ဓိဗလတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးကြီး ၊ သူ့ရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေက ရခိုင်ဘုရင် မင်းဆက်တွေက ဆင်းသက်လာတာ ၊ စာပေဆိုတာ အင်မတန်နှံ့စပ်တယ် ၊ သူ့မှာ သိုက်စာတွေကတော့ ပုံလို့ ၊ သူကရှိတယ်ဆိုတဲ့ နေရာကို ဘိုးဘိုးတို့က သူနောက်လိုက်ပြီး သူခိုင်းတာလုပ်ရတာဘဲ ၊ တချို့သိုက်စာတွေက ဘယ်လောက်တိကျသလဲဆိုရင် ဘယ်မြို့ ဘယ်ရွာ ဘယ်ဘုရား အဲလိုလိပ်စာမှာ အတိအကျပါတယ် ၊ အဲနေရာတွေကို ဆရာကြီးရောက်တောင် မရောက်ဖူးဘူး တပည့်တွေကို ငွေပေးပြီးလွှတ်ကြည့်ခိုင်းတယ် ၊ သူပြောတဲ့ နေရာမှာ သူပြောတဲ့ အမှတ်အသားတွေရှိတယ် ကျိန်းသေပြီ ဆိုမှ သူကပါလိုက်လာပြီး သိုက်တူးဖို့လုပ်ကြတယ် ။
ဘိုးဘိုးသိုက်စာ ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကစပေါ်တာတုန်း ပုဂံခေတ်က ပေါ်တာလား ၊ ဘယ်ကသာ မြေးရယ် ၊ မဟုတ်ပါဘူး အင်းဝခေတ်လောက်မှာ ပေါ်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ၊ ဘိုးဘိုးတို့ ဆရာသမား တွေပြောတာကတော့ “သိုက်စာအစ နတ်စက်ရောင်ကလို့” ဆိုတယ်ကွယ် ၊ နတ်စက်ရောင် ဆိုတာ လူနာမည်မဟုတ်ဘူးကွယ် ၊ ဘုန်းကြီးနာမည် လောကီပညာတွေကို အထိဋ်အထိပ် ရောက်အောင်တတ်တော်မူတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကွဲ့ ၊ အင်းဝမင်းဆက်ဆိုတာ သက္ကရာဇ် ရ၂၆ ခုနှစ်ကနေ သတိုးမင်းဖျားကနေ စတင်တည်ထောင်လာလိုက်တာ ၊ သက္ကရာဇ် ၁၀၉၅ ဟံသာဝတီပါမင်းလို့ ခေါ်တဲ့ မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်းထိ မင်းဆက်ပေါင်း ၂၀ဆက်ရှိတယ် နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်ဟာ မာန်အောင်မြင်ဘုရားဒါယကာ လို့နာမည်ကြီးတော်မူတဲ့ မင်းဆက် ၂၀ဘုရင်ရဲ့ အဘိုးတော်တဲ့ စနေမင်းလက်ထက်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်ကွယ် ဘုရင်က ဘုရားထီးတင်မဲ့ နေ့မှာ ဒီဆရာတော်ကြွလာပြီး ဇာတာတွက်ကြည့်တော့ မနက်ဖြန် တင်မဲ့ ထီင်္းတော်ကို ဒီဘုရင်အသက်က မမှီရှာတော့ဘူး ဒီည သန်းခေါင်အချိန်မှာ ဘုရင်နတ်ရွာစံမယ်လို့ အဟောထုတ်လိုက်တယ် ၊ ဘုရင်က မသေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ နတ်စက်ရောင် ဆရာတော် ကိုလျှောက်တော့ လက်ရယ်ခြေထောက်ရယ်ကို ဖြတ်ပါ ၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ဓားချွန်နဲ့ ထိုးပါ လို့ အလောင်းအစားထပ်ကြတယ် ၊ ည၁၂နာရီမှာ ဘုရင်ဟာ အဖျားဝင်ပြီး နတ်ရွာစံရှာတယ် ၊ ဒါကိစ္စတွေကို အစအဆုံးသိတော်မူတဲ့ ၁၉ဆက်မြောက်ဘုရင် တနင်္ဂနွေမင်းဟာ နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်ကို ဘုရင်ကိုးကွယ်ခံ ဆရာတော်အဖြစ် မြှောက်စားလိုက်တယ်။
အဲဒီကာလမှာ ဟိန္ဒူဝါဒီ ကသည်းတွေ တော်လှန်ပုန်ကန်တာရယ် ၊ အောက်ပြည်တစ်လွှားက မွန်တွေထကြွတာရယ် ၊ အယုဒ္ဓယဘက်က ပုန်ကန်တာရယ်တွေကြောင့် မင်းဆရာ နတ်စက် ရောင်ဟာ စစ်တိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေရတဲ့ တနင်္ဂနွေမင်းအတွက် စေတီပုထိုး ဘုရား ကျောင်းကန်တွေ အတွက် သိုက်စာ ရေးသားခဲ့ တယ် ၊ နောက်ပြီး နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်ဟာ ဟံသာဝတီထီးနန်းကို မွန်တွေသိမ်းပိုက်မှာကို ကြိုတင်သိရှိတဲ့အတွက်၊ ဘုရင်မင်းတရားကြီးရဲ့ လက်စ မပြတ်သေးတဲ့ ကောင်းမှုတော်တွေ အတွက် မြေတွင်းမှာ ရတနာတွေ ထားခဲ့ပြီး ၊ သိုက်စာ ရေးသားတော်မူခဲ့တယ် ၊ နောက်သိုက်စာ တစ်မျိုးရှိသေးတယ် အဲဒါကလဲ နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်ဘဲရေးခဲ့တာ သူကတော့ နန်းဆက်သိုက်စာလို့ နာမည်ကြီးတယ် ၊ “သစ္စာအကျင့်မှန် ကုသိလ သစ္စံတမန် အစောင့်ထား မုဆိုး တစ်ကျိပ်ငါး”ဘိုးဘိုး အဲဒါက ဘာကြီးတုန်း အဲဒါက ကုန်းဘောင်မင်းဆက်တွေ့ရဲ့ နေ့နံတွေလေကွယ် ၊ သ ဆိုတာ သောကြာ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို တည်မဲ့ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျဟာ သောကြာသားကွယ် ၊ စ္စာ ဆိုတာအင်္ဂါကွယ် သူ့နောက် နန်းတက်တဲ့ နောင်တော်ကြီးမင်း ကအင်္ဂါသားကွယ် နာမည်က (မောင်လောက်တဲ့ ) “အ”ဆိုတာ ကတော့ တနင်္ဂနွေကွယ် ၊ နောင်တော်ကြီးမင်းရဲ့ နောက်မှာ နန်းတက်မဲ့ ဘုရင်က မြေဒူးမင်းတဲ့ နာမည်က မောင်ရွ တဲ့ တနင်္ဂနွေသားပါကွယ် ၊ နာမည်နဲ့ နေ့နံမအပ်တာပါ ၊ ကျင့် ဆိုတာက တနလာင်္ပါကွယ် ၊ ငစဉ့်ကူးမင်းရဲ့ နေ့နံပေါ့ သူ့ငယ်နာမည်က မောင်ရဲလှကွယ် ၊ မှန် ဆိုတာက ကြာသပတေးကွယ် အဲဒီမင်းနောက် နန်းတက်တဲ့ ဖောင်းကားစားမင်း လို့နာမည်ကြီးတဲ့မင်း ပေါ့။ နာမည်က မောင်မောင်တဲ့ကွယ် ၊ ကု ဆိုတာတနလာင်္ပေါ့ ဗဒုံမင်းလဲ ခေါ်တယ် ဘိုးတော်ဘုရား လဲခေါ်တယ် ဘုရင်ရဲ့နာမည် ငယ်နာမည် မောင်ဝိုင်း တန လာင်္သားပါကွယ် ၊ သိ ဆိုတာ သောကြာကွယ် ဘကြီးတော်မင်း သို့မဟုတ် ဖန်နန်း ရှင်ခေါ်တဲ့မင်းပေါ့ သူက သောကြာသား ငယ်နာမည်က မောင်စိန်တဲ့ကွယ် ၊ ဘိုးဘိုးဟာက နာမည်တွေနဲ့နေ့နံတွေနဲ့ ကိုက်လဲမကိုက်ဘူး။ ကိုက်ရင် ဘုရင်ဘယ်ဖြစ်တော့မလဲကွယ် ၊ သိုက် စာက သက္ကရာဇ် ၁၀၉၅ ခုနှစ် အင်းဝခေတ် မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်း လက်ထက်မှာ ရေးခဲ့တာတာကွယ် ၊ ဘုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို စတည်ထောင်တာ “ဥသြတွန်မည်” ကုန်းဘောင် တည် ဆိုတဲ့ တဘောင်အရ ၁၁၀၅ခုနှစ်မှာ ဒါက မှားတယ်ကွယ် ၊ ကုန်းဘောင်တည်ထောင်တာ သက္ကရာဇ် ၁၁၀၄ခု ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကုန်းဘောင်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အလောင်းမင်း တရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ တည်ခဲ့တဲ့ ရွှေချက်သို စေတီကျောက်စာမှာ သက္ကရာဇ် ၁၁၀၄ခုမှာ ရတနာသိင်္ဃမြို့ကို တည်တော်မူ၍ ၁၁၁၄မှာ နန်းတက်တော်မူသော အလောင်းမင်းတရားကြီး ကောင်းမှုတော်လို့ ကျောက်စာထိုးထားတယ်ကွယ် ၊ ခုနက စကားပြတ်သွားအုံးမယ် ပြန်ပြောအုံး ဘိုးဘိုးကလဲ ဘာလို့ဘုရင်တွေက နာမည်နဲ့ နေ့နံမကိုက်တာတုန်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ရာကျော်က ရေးခဲ့တဲ့ သိုက်စာက တိတိကျကျမှန် နေတော့ ဘုရင်တွေက သားမွေးတာနဲ့ နာမည်တစ်ခြား နေ့တစ်ခြားမှည့်လိုက်တယ် ၊ တော်ကြာ မင်းလောင်းဆိုပြီး ငယ်စဉ်ကတည်း ဖျောက်ဖျက်ပြစ်မှာ ဆိုးလို့ကွယ် ၊ ဘကြီးတော်မင်းပြီးတော့ သိုက်စာမှာ လ အက္ခရာဟာ ဗုဒ္ဓဟူးလို့ ဆိုလိုတယ် ၊ သာယာဝတီမင်းကို ဆိုလိုတာကွယ် သာယာဝတီမင်းသားက ဗုဒ္ဓဟူးသားကွယ် ငယ်နာမည်က မောင်ခင်တဲ့ ၊ သစ္စံက သ အက္ခရာက သောကြာ ကိုညွှန်းတာကွယ် ၊ သာယာဝတီမင်းနောက် နန်းတက်မဲ့ ပုဂံမင်းကွယ် သောကြာသား နာမည်က မောင်ထောင်တဲ့ ၊ စ္စံ ဆိုတာက အင်္ဂါကိုဆိုလိုတယ် ပုဂံမင်းနောက် နန်းတက်ခဲ့တဲ့ မင်းတုန်း မင်းတရားကြီးဟာ အင်္ဂါသားပေါ့ ၊ နာမည်က မောင်လွင်တဲ့ ၊ တ အက္ခရာကတော့ စနေနံ ကိုဆိုလို တာပါ ၊ မင်းတုန်းမင်းကြီးနောက် နန်းတက်မဲ့ သီပေါဘုရင်လေးဟာ စနေသားပေါ့ကွယ် ငယ်နာမည် မောင်ရေစက်တဲ့ ၊ ဒါကြောင့်ဘုရင်တွေရဲ့ နန်းဆက်နဲ့ နန်းသက် ကိုသိရအောင် ၊“သားမြတ် အစစ် သုံးနှစ်စစ်ကိုင်း၊ဆင်ဖြူတိုင်းမှာ ဆယ့်သုံးနှစ်သာ၊သားသည်ခြောက်နှစ် စဥ့်ကူးဖြစ်၍၊ ရက် သစ်ခွန်ကား ဖောင်းကားစား၊ ဘိုးတော် သုံးခွန် ၊မှန်ရှင်ဆယ့်ရှစ် ၊ ကိုးနှစ် သာယာဝတီ ၊ပုဂံသည် ခြောက်၊နှစ်ဆယ့်ခြောက် တုန်း(မင်းတုန်း) ၊နန်းဆုံးခွန်နှစ် သီပေါဖြစ်၏” လို့ ရှေးပညာရှိများ နန်းဆက်နဲ့ နန်းသက်ကို ဒီလိုရေးထားခဲ့ကြတယ် ။
ဒီသိုက်စာ အရဆိုရင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်က ၁၅ဆက်ပေါ့ အေးပေါ့ကွဲ့၊ ဟင် ၁၁ဆက်တည်းပါ ဘိုးဘိုးကလဲ သားတို့ စာထဲမှာ ပါတယ်လေ ဘိုးဘိုးပြောတာလဲ ၁၁ပါးဘဲဟာကြီး သိုက်စာမှားတာ မလား ဘယ်ကသာကွယ် သိုက်စာဟာ အစစ်အမှန်ဆို မှားရိုးမရှိဘူးကွဲ့ ဘိုးဘိုးကိုယ်တွေ့ တွေများပေါ့ ၊ ဒါဆိုကျန်တဲ့ လေးပါးဘယ်မှာတုန်း အင်း သီပေါမင်းအထိ ၁၁ခုနော် ၊ မာန် အစောင့် ထား ဆိုတာ ကျန်နေတယ်မို့လား အဲဒီထဲက မာန်ဟာ ကြာသပတေးကို ကိုယ်စားပြုတယ်ကွယ် အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ ဘုရင်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဘမော်ဟာ ကြာသပတေးသား ၊ အဆိုတာ တနင်္ဂနွေသားဗိုလ်ချုပ် ကိုဆိုလိုဟန်ရှိတယ် ၊ စောင့် ဆိုတာကတော့ အင်္ဂါသား သမ္မတကြီး စ၀်ရွှေသိုက်တဲ့ ၊ ထားဆိုတာက စနေသားကြီး သမ္မတကြီးမဟာသရေစည်သူ စောဘဦး ကိုဆိုလိုတာ၊ ဘိုးဘိုး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ထိန်လင်းလေ စနေသားမဟုတ်လား မဟုတ်ပါ ဘူးကွယ် ၊ စနေနေ့ညမှာ မွေးတာပါ ၊ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဇာတာကို မန္တလေးက ဖလိတစိန္တာ ဆရာကြီး ဦးဘိုထွေး စစ်ပေးထားတာ ရှိပါတယ် ၊ ၁၉၁၅ ခု ဖေဖော်ဝါရီ၁၃ရက် မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၂ရ၆ တပေါင်းလဆန်း ၁ရက် စနေနေ့ညမှာ မွေးတာပါ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ဟာ တနင်္ဂနွေသားပါကွယ် ၊ ဘိုးဘိုးဆရာက လွတ်လပ်ရေး မရခင် ၂နှစ်အလိုမှာ ဆုံးတယ် ၊ သူကမသေခင် စကား စပ်မှိရာကနေ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ တိုင်းပြည်မအုပ်ချုပ်ရဘူး နောင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မဲ့ လူဟာ အင်္ဂါသားလို့ ပြောသွားတယ်ကွယ် ၊ လွတ်လပ်ရေး ရတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပဋ္ဌမဦးဆုံး သမ္မတ ကြီးဟာ စ၀်ရွှေသိုက်ဖြစ်လာတယ် ၊ သူကဘုရင်လဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ အော်ခက်ကုန်ပြီကွယ် ၊ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်တဲ့ လူဆိုတာက မင်းပါဘဲကွယ် ၊ လောကသမ္မုတိ မင်းပေါ့ ဟိုလိုအဆောင်ယောင်တွေနဲ့ မင်းတော့မဟုတ်ဘူး ၊ ငါ့မြေးမမြင်ဖူးလို့ အရင်ကသမ္မတကြီးတွေ ကြွလာရင် သူ့နောက်မှာ စည်တော်ရွှမ်းတဲ့ လူတို့ ၊ ထွေးခံ သယ်တဲ့လူတို့ ပါတယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံတက်လာတဲ့ သမ္မတ အဆက်ဆက်ဟာ သိမ်ဖြူ ဆရာတော်ကြီးကိုကိုးကွယ်တယ် ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာကနေ ကူးပြောင်းလာတဲ့ သမ္မတကြီး မန်းဝင်းမောင်တောင် သိမ်ဖြူဆရာတော်ကြီးကို ဆည်းကပ် ကိုးကွယ်တယ် ၊ ဒါဆို သမ္မတကြီး မန်း ၀င်းမောင်က သိုက်စာထဲမပါဘူးပေါ့ အေးပေါ့ကွယ် ၊ ဒါကြောင့်သူ့လက်ထက်မှာ တိုင်းပြည်က မောက်ကမ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ ၊ ဒါကြောင့် သိုက်စာမှန်ရင် မှားရိုးမရှိလို့ ဆိုတာပေါ့ကွယ် ၊ အဲဒီသိုက်စာကို ရေးခဲ့တဲ့ ခေတ်တုန်းက လမိုင်းဝန်ဆိုတာ မရှိဘူးကွယ် ၊ လမိုင်းဝန်ဆိုတာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ကြမှ ခန့်အပ်ကြတာ ၊ မဟာဓမ္မ ရာဇာဓိ ပတိမင်း လက်ထက်မှာ အင်းဝပျက်သမို့ တည်ထားခဲ့တဲ့ စေတီပုထိုး ဘုရားကျောင်းကန်တွေ အတွက် နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်က သိုက်စာများစီမံခဲ့တယ် ၊ နောင်လူတွေဟာ နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်ရေးခဲ့တဲ့ သိုက်စာမို့ နတ်စက်ရောင်သိုက်စာ လို့ခေါ်ကြတယ် ။
သိုက်စာဆိုတာ အဲဒီက စခဲ့တာလို့ စာဟောင်းတွေ မှတ်သားထားဖူးတာဘဲကွယ် ၊ သိုက်တူး တော့ဘယ်လိုတူးတုန်း ၊ ဂေါ်ပြားနဲ့ထိုးတာလား ဘယ်ကသာကွယ် အဲလိုမဟုတ်ရပါဘူး ၊ သိုက်တါံးကို သိုက်စောင့်တွေကဘဲ ဖွင့်လို့ရတယ်ကွယ် ၊ သိုက်မတူးခင် သိုက်ရှိတဲ့နေရာကို သိုက်စာ အရသွားကြည့်ရတယ် ၊ သိုက်စာမှာရေးထားတယ်ကွယ် သိုက်စာမှာ “ဒေးဒရဲတောင် ခွေးတက် ဟောင် ညောင်ပင်ခြေရင်း ရွှေကိုးတင်း ” အဲလိုလေး ရေးထားတာ ဒါဆိုဒေးဒရဲ ဆိုတာ မြို့လား ရွာလား ၊ သိဖို့လိုတယ် ၊ အခုပြောမဲ့ ဒေးဒရဲ ဆိုတာ ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံခရိုင် မှာရှိတယ် ၊ အဲဒီမြို့ကို တူးမယ်ဆိုတော့ ဆရာက တပည့်တွေကို ရှိမရှိစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တယ် ၊ ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီဒေးဒရဲ ဟုတ်မဟုတ် ၊ သိုက်စာကို ဖတ်ရတယ် သိုက်စာမှာက “တော်ကိုးလုံး ၊ ကုန်းကိုးလုံး ” လို့ ညွန်ပြတယ် ၊ တော်ကိုးလုံးဆိုတာ အဲဒီမြို့ကို ၀ိုင်းထားတဲ့ ရွာတွေ တော်ကမယ် ၊ တော်လှ ၊ တော်ညွန့် ၊ တော်ကမန် ၊ တော်ပေါင်စိန် ၊ တော်ဖရုံ ၊ တော်တလူ ၊ တော်နဲ့စတဲ့ ရွာကိုးခု ၊ ကုန်း ကိုး လုံးဆိုတာ အဲဒီမြို့ကို ၀ိုင်းရံဖွဲ့ထားတဲ့ ရွာနာမည်တွေပါဘဲ ၊ တော်ကျိုက်ကုန်း ၊ ရွှေတောင်ကုန်း ၊ ဘုရားကြီးကုန်း ၊ ကျားကုန်း၊ သာယာကုန်း ၊ အဲလိုကိုးခုရှိတယ် နောက်ရောက်တဲ့ အခါ ပြမယ် ၊ ဒါဆိုရင် သိုက်စာထဲက ညွှန်ပြတဲ့အတိုင်း မလွှဲတော့ဘူး မှန်နေပြီ ၊ အဲဒါနဲ့ ဘိုးဘိုး နဲ့ ဘိုးဘိုးဆရာနဲ့ အပေါင်းအပါ ၂၀ဟာ ဒေးဒရဲမြို့ကို သွားတယ် ၊ သွားတော့ ကျိုက်ဒေးယျုံ ဆိုတဲ့ ဘုရားကြီးရှိတယ် ၊ ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပု တည်ထားခဲ့တာ ၊ ခုနက ကုန်ုး၉လုံး ရှိတယ်ဆိုတာလဲ ဟုတ်တယ် ၊ တောင်ကိုးလုံးရှိတယ် ဆိုတာလဲ မှန်တယ် တောင်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကွာမှာ ဘုရားတစ်ဆူ တစ်ဆူတည်ထားခဲ့တယ် ၊ တစ်တောင် နဲ့ တစ်တောင်ဟာ ကိုးတာ ကွာတယ်ကွဲ့။
ဘိုးဘိုးတို့ တစ်တွေတည်းခဲ့တာက ဘုန်းကြီးကျောင်း စစ်ကွင်းကျောင်းလို့ ခေါ်တယ် အဲဒီ ဆရာတော် ကလဲ လောကီပညာတွေ တတ်တယ် ၊ အဲဒီကျိုက်ဒေးယျုံ ဘုရားကြီးရဲ့ အ နောက်မှာ အဲဒီကျောင်းရှိတယ် ၊ အခုထိရှိနေသေးတယ် ၊ အဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့ ဘိုးဘိုးဆရာနဲ့ ဆိုရင် ဘိုးဘိုးဆရာက ပညာပိုမြင့်တယ် ၊ ဒါနဲ့ သိုက်ကတူးပြီလား ဘယ်လိုတူးတုန်း အယ် မြေးရယ် တူးလို့ချက်ချင်းမရပါဘူး ၊ အဲဒီမြို့မှာ ရှိတဲ့ အစောင့်အရှောက်တွေကို ဆင့်ခေါ်ရ တယ် ၊ ဘယ်လိုခေါ်တုန်း အော် ဂါထာတွေ မန္တရားတွေ ပွဲတွေနဲ့ ခေါ်တာပေါ့ ၊ အဲဒီစစ်ကွင်း ကျောင်း ဆ၇ာတော်က ဘီလူးကြီးတစ်ကောင် မွေးထားတယ် ၊ သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ ဆရာက၊ ဟင် ဘီလူးကြီးကိုဘယ်လိုမွေးတုန်း ၊ မသိပါဘူးကွယ် ဘိုးဘိုး တကယ် မြင်ခဲ့ရ တယ် ၊ အဲဒီဘီလူးကို ရာမာယန ဇာတ်ထဲက ဘီလူးလိုလား ဘိုးဘိုး ၊ ဟုတ်ပါဘူးကွယ် ဘာဦးထုပ်မှ မပါပါဘူး လူလိုပါဘဲ ၊ အမွှေးရှည်ကြီးတွေနဲ့ ညဘက် ကျောင်းပေါ် လမ်း လျှောက်နေတာဘဲ ၊ ဘိုးဘိုးတို့ကို မစားဘူးလား စားလို့မရဘူး ဆရာက ဘိုးဘိုးတို့ကို တောင် စောင့်ခိုင်းထားသေးတယ် သူ့ကို နောက်နေ့မနက်မှာတော့ ဆရာက ပြောတယ် သိုက်က ဒီဒေးဒရဲနဲ့ အရှေ့ဘက်လေးမိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ ရွာမှာတဲ့ ရွာနာမည်က သင်ပေါင်းချောင်လို့ ခေါ်တယ်၊အဲဒီမှာ သိုက်ရှိတယ် လို့တိတိကျကျသိရတယ်၊ ဘယ်လို သိလဲ ဘိုးဘိုးရဲ့၊ ညက သိုက်စောင့်တွေကို ခေါ်စစ်လိုက်တာပေါ့၊ သူတို့က ပြောရောလား ပြောတယ်လေ ၊ အဲဒီသိုက်နန်းရှင် မိန်းမက ရန်ကုန်သိမ်ကြီးဈေးမှာ ဈေးရောင်းနေတဲ့ လူ တဲ့ဗျာ သိုက်နန်းရှင်ဘ၀ကနေ လူသွားဖြစ်နေတာတဲ့ ။
“ဟင်”တကယ် ဟုတ်တယ်မြေးရဲ့ ၊ အဲဒီညက ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကို ဆရာကခေါ် စစ်လိုက်တော့ အကုန်ပြောပြတယ် ၊ အဲဒီသိုက်မှာ သိုက်နန်းရှင်က လူဖြစ်နေလို့ သိုက်မှာ သရဲကြီးတွေဘဲ ကျန်ခဲ့တယ် ၊ ဆရာနဲ့ ဘိုးဘိုးတို့က စစ်ကွင်းကျောင်းဘုန်းကြီးရဲ့ စာနဲ့ သင်ပေါင်းချောင်ရွာကို သွားကြတယ် ၊ အဲဒီရွာမှာလဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ် သင်ပေါင်း ချောင်ကျေးရွာကျောင်းပေါ့ ၊ သိုက်က အဲဒီကျောင်းရဲ့ ခေါင်းရင်း မြသိန်းတန်လို့ ခေါ်တဲ့စေ တီတည်မဲ့ နေရာမှာ ရှိတယ် ၊ ဘုန်းကြီးကို ဆရာက မြသိန်းတန် စေတီလေး တည်ချင်လို့ ပါလို့လျှောက်တော့ ဘုန်းကြီးက ဆ၇ာ့ကိုဘယ်နားမှာ တည်ချင်လဲလို့ မေးတယ် ၊ ဆရာက သိုက်ရှိမယ် ထင်တဲ့ နေရာကို ပြပြီးမြေတောင်းတယ် ၊ ဘုန်းကြီးက ဘိုးဘိုးတို့ သိုက်တူးမယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး ၊ ရိုးရိုးသားသား ထင်ပြီး အသာတကြည်ဘဲ မြေပေးတယ် ၊ မြေပေး တဲ့နေရာမှာဘဲ ဆရာက ညဘက်သိုက်နေရာ သတ်မှတ်လိုက်တယ် ၊ သိုက်ပတ်ပတ် လည် မှာ ၊ ဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လေးတွေကို ကြဲထားလိုက်တယ် ၊ ပြီးတော့ ဆေးနွား ဆိုတဲ့ အင်းတွေ ဆေးတွေနဲ့ စီမံထားတဲ့ ရွံ့ရုပ်နွားလေးတွေနဲ့ အဲဒီနားမှာ ချထားခဲ့ရတယ် ၊ “ဆေးနွားက ဘာလုပ်တာလ”ဲ အော်ကွယ် အဲဒါက ဒီသိုက်ကို တူးလို့ ရမရ ပညာ စမ်းလိုက်တာ ၊ ဒီသိုက်ထဲက အစောင့်အရှောက်တွေကို အခုဘိုးဘိုးရဲ့ ဆရာက နိုင်မနိုင် တူးလို့ရမရ အဲဒါစမ်းသပ်တာ ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီနွားရုပ်လေးက မိုးလင်းရင် ဦးချိုမှာ သွေးစသွေးန ဒါမှမဟုတ် ရွှေရောင် ငွေရောင် ထနေတယ် ၊ မနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီနွားလေးရဲ့ ဂျိုဟာ တုန်းတိတိ ကျိုးသွားတယ် ၊ ဒါဆို ဒီသိုက်ကို တူးလို့မရဘူး ၊ အခုဘယ်လိုနေတုန်း၊ အခုတူးလို့ရမယ်လို့ ဆရာက ဆိုတယ်ကွယ် ၊ ဒါက ကုန်းသိုက်မို့လို့ ဆေးနွားနဲ့ စမ်းသပ်ရတယ်ကွယ် ၊ ရေသိုက်ဆိုရင် ဘဲရုပ်လေး လုပ်ရတယ် ၊ဆေးဘဲလို့ခေါ်တယ် ၊ အဲလိုဘဲ ဆေးဘဲလေးလုပ်ပြီး ရေထဲကို ချထားလိုက်ရင် မိုးလင်းလို့ ကိုယ်ချတဲ့နေရာကို ပြန်ရောက်မလာဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီသိုက်ဟာ သာသနာတော်ဆိုင်ရာ သိုက်ဘဲကွယ် ၊ တူးယူလို့မရဘူး ။
ဒါနဲ့ ဘုရားတည်ဖို့ အဲဒီနားမှာ အုတ်တွေ ဘာတွေဖုတ်ကြဖို့ ပြင်တယ် ၊ စေတီတော်လေး တည်ဖို့မြေနေရာလေးလုပ်တယ် ၊ နေ့လည်ပိုင်းမှာ တပည့်တွေကို သိုက်ထဲကိုဝင်တဲ့ အခါ မကြောက်ကြဖို့ သိုက်ထဲမှာ လှေလေးက ၈စီးရှိတယ် ၊ မကိုင်ဖို့ နောက်ပြီး သိုက်ထဲမှာ စောင့်နေတဲ့ အကောင်ဗလောင်တွေကို ဂါထာမန္တန်တွေနဲ့ ထုတ်ထားမှာဖြစ်လို့ မလှုပ်နိုင်ဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ခြောက်လှန့်လိမ့်မယ် ၊ ကြောက်စရာမလိုဘူး ၊ နောက်ပြီး သိုက်ထဲမှာ မောင်းတစ်လုံးရှိတယ်၊ အဲဒီမောင်းဟာ “စည်တော်ချိုး” မောင်းလို့ ခေါ်တယ်၊ အဲဒီမောင်းကို အခုတူးနေတဲ့ လူတွေထဲက တစ်စုံတစ်ယောက်က ယောင်ရမ်းပြီး တီးမှိလိုက်ရင် သိုက်မှာ စောင့်နေတဲ့ အစောင့်အရှောက်တွေရဲ့ အနှောင်အဖွဲ့တွေဟာ လွတ်ငြိမ်းသွားတယ် ၊ အဲဒီအခါမှာ အစောင့်အရှောက်တွေက ခြောက်လှန့်ပြီး ပြုစားတတ်တယ် ဥပမာ ရေအထင်နဲ့ ကူးပါစေလို့ သူတို့ပါးစပ်က အော်လိုက်ရင် တူးတဲ့လူတွေ အကုန်လုံး ရေပြင် ထင်ပြီး ကူးကြတယ် ၊ တချို့ရူးကြတယ် အဲဒါကြောင့် ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မတီး ရဘူး ၊ အဲလိုမှာတယ် ၊ သိုက်ထဲကိုရောက်ရင် ဆရာက ဘာမှမလုပ်ဘူး အဲဒါကိုဘဲ မီးမ တောင်းနဲ့ မီးမတောင်းနဲ့ မီးမတောင်းနဲ့ ဆိုပြီးပြောင်းပြန်ဆိုပြီး အဲဒီမောင်းလေးကို လူနဲ့ကွယ်ပြီး ရွတ်နေရတာ ၊ အဲဒီမောင်းအရှေ့ကနေသတိပေးနေရတယ် ။ အဲဒီမောင်းဟာ သိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ အချုပ်အချာဘဲ သိုက်စောင့်တွေသိုက်နန်းရှင်တွေရဲ့၊ လွတ်မြောက်မှုဟာ အဲဒီ မောင်းရဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်ကွယ် ၊ အဲဒီမောင်းကို တီးလိုက်ရင် သိုက်ကို စောင့်တဲ့ အစောင့်အရှောက်တွေကို တုတ်နှောင်ထားတဲ့ ဂါထာမန္တာန်ပြေပြီး ၊ သိုက်စည်းကျိုး သွားလို့မို့ “စည်းတော်ကျိုးမောင်း” တစ်နည်း “စည်တော်ကျိုး” မောင်း ခေါ်တယ်ကွယ် ။
တတိယပိုင်း လာမည် (သို့သော်) ကြာမည် ၊ မှတ်ထားတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်မတွေ့သေးပါသဖြင့်။
Posted by ငွေလမင်း at 10:38 PM 10 comments
စာရေးဆရာကြီး William Wordsworth ၏ပုံ
ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တုန်းကပါ ၊ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်အဖေဖေဟာ ဆပ်ကပ်ပွဲကို ကြည့်ဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ရန်အတွက် တန်းစီနေပါတယ် ၊ နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ အကြားမှာ လက်မှတ် ရောင်းတဲ့ နေရာနဲ့ မိသားစုတစ်စုသာ ရှိပါတော့တယ် ၊ ဒီမိသားစုကို ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေး စွဲကျန်နေခဲ့ပါတယ် ၊ ကလေးက ရှစ်ယောက် အားလုံး၁၂နှစ် အောက်အရွယ်တွေ ဖြစ်ဖို့များပါတယ် ၊ သူတို့တွေမှာ ငွေများများစားစား မရှိတာကို သူတို့ရဲ့ ဟန်ပန်နဲ့ ၀တ်စားလာတဲ့ အ၀တ်အစားလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။
သူတို့ဝတ်လာတဲ့ အ၀တ်အစားလေးတွေဟာ တန်ဖိုးမကြီးလှပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လေးတွေပါ လက်ချင်းတွဲကာ သူတို့မိဘတွေ နောက်က နှစ်ယောက်တွဲ တန်းစီနေတဲ့ ကလေးအားလုံးဟာ ရည်ရည်မွန်မွန်လေးတွေပါ ၊ သူတို့လေးတွေက ဒီညကြည့်ရမဲ့ လူရွှင်တော်တွေ အကြောင်း ဆင်တွေအကြောင်း အခြားပြကွက်တွေ အကြောင်းတွေကို တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောဆိုနေကြပါတယ် ၊ အရင်က သူတို့လေးတွေဟာ ဆပ်ကပ် ပွဲဆိုတာကို လုံးဝမကြည့်ခဲ့ဖူးဘူးဆိုတာ မှန်းဆကြည့်နိုင်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ် ၊ ဒီနေ့ညဟာ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘ၀အတွက် အထူးအဆန်းလေး တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ကျိန်းသေပါတယ် ။
သူတို့ အဖေနဲ့ အမဟာ အုပ်စုရဲ့ ရှေ့နားမှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်နေကြပါတယ် ၊ အမေဖြစ်သူဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ လက်ကိုဆွဲထားရင်း ဒီညမှာတော့ ရှင်ဟာ ကျမအတွက် ချပ်ဝပ်တန်ဆာတွေနဲ့ တောက်ပနေတဲ့ သူရဲကောင်းကြီးပါဘဲဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ယောကျာ်းရဲ့ မျက်နှာကို ရွမ်းရွမ်းစားစား ကြည့်နေသလို ၊ ယောကျာ်း ဖြစ်သူကတော့ ပြုံပြုံးကြီးလုပ်နေပြီး ဟန်ပန်ကြီးစွာနဲ့ သူ့မိန်းမကို ကြည့်ပြီး “မင်းတောင် ဒီအမှန်တရားကို နားလည်သွားမှကိုး ” ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ့ကို ပြန်လည် ကြည့်နေပါတယ် ။
လက်မှတ်ရောင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးက “လက်မှတ်ဘယ်နှစ်စောင်ဖြတ်မှာလဲ ” လို့ဖခင်ဖြစ်သူကို လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ် ၊ “ကျေးဇူးပြုပြီး လူကြီးလက်မှတ် နှစ်စောင် ကလေးလက်မှတ် ၈စောင် ပေးပါဗျာ ၊ ဒါမှ ကျွန်တော်မိသားစုကို ဆပ်ကပ်ပြနိုင်မှာဗျ ”လို့ သူက၀င့်ကြွားစွာနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ၊ အဲဒီအချိန်မှာ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးက ကျသင့်ငွေကို ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ၊ သူ့ဇနီးက သူ့လက်ကို လွှတ်လိုက်သလို သူမရဲ့ ဦးခေါင်းဟာလဲ ငိုက်စိုက်ကျသွား ပါတယ် ၊ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းဟာလဲ တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်လာပါတော့တယ် ၊ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ရှေ့ကို နဲနဲတိုးလိုက်ပြီး ၊ “ဘယ်လောက်ကျတယ်လို့ ပြောလိုက်တာလဲ ခင်မျာ ”ဟု တိုးလျှဆုတ်နစ်သော အသံနဲ့ မေးလိုက်ပါတယ် ၊ လက်မှတ်ရောင်းသူက ကျသင့်တာ ထက်ပိုပြီးတော့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
သူတို့မှာ ငွေလုံလုံလောက်လောက် ရှိပုံမရပါ ၊ သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေကို ငွေမလောက်လို့ ဆပ်ကပ်မပြနိုင်တော့ဘူးလို့ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်ပြောထွက်နိုင်ပါ့မလဲ ၊ အခြေအနေကို သိတဲ့ ကျွန်တော်ဖေဖေဟာ သူ့အင်္ကျီထဲက ဒေါ်လာ၂၀တန် တစ်ရွက်ကို မြေကြီးပေါ်ကို ချလိုက်ပါတယ် ၊ ဖေဖေဟာ ဒေါ်လာ နှစ်ဆယ်တန်ကို လှမ်းပြီး ကောက်ယူလိုက်ပြီး အဲဒီလူရဲ့ ပခုံးကို ပုတ်ခါ ၊ “ဒီကဆရာကြီး ခင်များအိပ်ကပ်ထဲက ထွက်ကျတာလေ” ဟုပြောလိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီလူကြီးက အခြေအနေကို သိရှိနားလည်ပါတယ် ၊ သူကဖေဖေ လှမ်းပေးလာတဲ့ ဒေါ်လာ၂၀တန် ကိုငြင်းဆန်မနေတော့ဘဲ ၊ သူ့မျက်နှာဟာ အခြေအနေကို တန်ဖိုးထားပါတယ် ၊ သူက ကျွန်တော့် ဖေဖေရဲ့ မျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်ခါ ၊ သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖေဖေကို လက်တွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး ဒေါ်လာ၂၀တန်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ယူလိုက်ပါတယ် ၊ ပြီးတော့ သူ့ပါးပြင်ပေါ်သို့ မျက်ရည် တစ်စက် စီးကျခါ တုန်ရီနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ ကျွန်တော့ဖေဖေကို “ ဆရာကြီးရယ် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ ၊ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ဒါလေးဟာ ကျွန်တော့်မိသားစု အတွက်တော့ အရမ်းအဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်ဗျာ ”
ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့အဖေဟာ ကားလေးဆီကို ပြန်သွားခဲ့ပြီး ၊ အိမ်သို့ ပြန်မောင်းလာခဲ့ပါကြပါတယ် ၊ အဲဒီနေ့ညက ကျွန်တော်တို့ သားအဖနှစ်ယောက် ဆပ်ကပ်ပွဲကို မကြည့်ခဲ့ရပါဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းမဲ့ မကြည့်ခဲ့ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီဝတ္ထုလေးကို ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့အချိန်က ကျွန်တော်၈တန်း ကျောင်းသားဘ၀ကပါ ရေးတဲ့ လူက William Wordsworth (၀ီလီယန် ၀ါ့(ဒ်) ၀ါ (သ်) ပါ ၊ နာမည်လေးက The circus ပါ နှစ်တွေ ကြာခဲ့ပေမဲ့ Chicken soup For the soup Vol -2 ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးဟာ ကျွန်တော့် အိပ်ယာဘေးမှာ အမြဲရှိနေခဲ့ပါတယ် ၊ ဒီစာအုပ်လေးကြောင့် ကျွန်တော်နဲနဲ ပြောင်းလဲခဲ့ဖူးပါတယ် ၊ အဲဒီ ၀တ္ထုလေးထဲက ကျွန်တော်အမှတ်တရ ရှိတဲ့စာလေး တစ်ပိုဒ်ကတော့ “We didn’t go to the circus that night, but we didn’t go without.” အဲဒီညက ကျွန်တော်တို့ သားအဖ ဆပ်ကပ် မကြည့်ခဲ့ရဘူး၊ ဒါဟာ အကြောင်းမဲ့ မကြည့်ခဲ့ရတာတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ၊ အရမ်းကောင်းတဲ့ စာသားလေးပါ ၊ တခါတရံမှာ သူတစ်ပါးကို ကူညီလိုက်ရလို့ ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်ရေး တစုံတရာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရမယ် ဆိုရင် ၊ ဒါဟာ didn’t go without “အကြောင်းမဲ့” မဟုတ်ဘူးလို့ ဖြေ သိမ့်နိုင်ကြပါစေကြောင်း……။
ဒီစာလေးကို ရေးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်ုပ်၏ ချစ်လှစွာသော မဒမ်ငွေက ချက်ချင်းတင်ရန် ညွန်ကြား ခြင်းကို ခံရပါတယ် ၊ မတင်ဘူးလို့ ပြောတော့ စိတ်တွေအရမ်းဆိုးနေပါတယ် ၊ စာလဲရေးရ မဒမ်ငွေရဲ့ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်မှုဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံစားနေရသည့် သနားစဖွယ် အရမ်းကောင်းသည့် မစ္စတာငွေလမင်းက ၊ စာရှုသူအားလုံးတို့ကို ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့သော နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ၊ ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြ ပါစေခင်မျာ ။
Posted by ငွေလမင်း at 12:58 PM 10 comments
နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားကို အင်တာဗျူးခြင်း
အနာဂတ် ခေါင်းဆောင်များ ပညာရင်နို့သောက်ဆို့ရန်ကျောင်းတော်သို့ ချီတက်နေကြပုံ
အခမဲ့ ပညာရေးမရှိလို့ ကျောင်းမတက်နိုင်ပါဘူးရှင်
၀န်ကြီးဖြစ်ရင် ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ် အကောင်ထည်ဖော်မယ်
“ဒီပိုစ့်လေးဟာ ဖော်ဝက်မေးလ်လေးပါ မန္တလေး ဖောင်တော်ဦး ပရဟိတက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း စေတနာ ဆရာမလေးတစ်ယောက် ကနေပို့ပေးလိုက်တဲ့ မေးလ်လေးပါ ၊ ရီစရာ မောစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေလို့မို့ အားလုံးကိုမျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ် ၊ အောက်ခြေက စာသားလေးတွေက ကျွန် တော်ကြုံခဲ့ ရတာလေးတွေနဲ့ အဘိုးပြောပြဖူးတာလေးတွေကို ထည့်ပေးလိုက်တာပါ ”
ဖြေ-အချိန်မီ ဆရာ့ထဲကို ကိုယ့်ခုံနံပါတ်လေးပါသွားအောင် ကျူရှင်လခ သွင်းနေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဆရာတွေလိပ်စာကို စုဆောင်းနေပါတယ်။ ဒါမှလည်းစာမေးပွဲပြီးပြီးချင်း ကန်တော့လို့ရအောင်ပါ။ကန်တော့ဖို့ ပိုက်ဆံကိုတော့ ဟိုနေ့ကမှ အိမ်ကို လှမ်းပြီးဖုံးဆက် ပြောထားပါတယ်။ လောလောဆယ် စာတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။
မေး-ဒါကနောက်ဆုံးနှစ်လည်းဖြစ်တယ် ဒီစာမေးပွဲအောင်ရင် ဘွဲ့လည်းရတော့မယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ?
ဖြေ-သိပ်ကိုဝမ်းနည်းပြီး ယူကြုံးမရဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်ကယ်လို့ဘွဲ့ရခဲ့ရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့က တရားဝင်လိုင်စင်ရ အလုပ်လက်မဲ့ တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ အခုက ကျောင်းတက်နေတာဆိုတော့ ဘာပြောပြော ကျောင်းသားဘ၀ဆိုတော့အိမ်က ထောက်ပံ့ ပေးနေဆဲပါ ဒါပေမယ့် ကျောင်းပြီးသွားရင်တော့ လုံးဝကို supply တွေပိတ်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့ အနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းတော်ကြီးကိုလွမ်းတာတို့ သူငယ်ချင်းတွေကို တမ်း တတာတို့ ချစ်သူလေးကို ခွဲရမှာတို့ထက်သောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီး ၀မ်း နည်းမိပါတယ်။
မေး-ကျောင်းသားဘ၀ဆိုတာကလေ တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်တွေ ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒီတော့ မောင်လေးရဲ့ အနာဂတ်ကိုရော ဘယ်လိုစိတ်ကူးထားလဲ။ အမေရိကားမှာဆိုရင် University Graduate တွေဟာ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေတို့ ဘာတို့တွေတောင် ရောက်ကြတယ်လေ မောင်လေးတို့ရော?
ဖြေ-ဒါမျိုးစဉ်းစားဖို့တော်တော်လေးကို ခက်ပါတယ်။ တစ်နေ့သင်လိုက်တဲ့ စာတွေကို တစ်နေ့ စာတစ်နေ့ မှန်မှန်လုပ်ရအောင် မီးမလာလို့ စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ တစ်ကယ်ဆိုရင် နေ့သင်တဲ့စာ တွေကို ပြန်လုပ်ဖို့ ညကိုတော့ မီးလာပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ရာထူးမျိုးတွေကို စိတ်ကူးဖို့နေနေသာသာ လက်တစ်ဖက်က ထမင်းချိုင့်ကိုကိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ကားကလက်တန်းကို ကိုင်ထားပြီးစီးရတဲ့ မူဆယ်လားရှိုးဘက်က ၀က်တင် တဲ့ကားတွေလို ကျောင်းကားတွေကို နေ့တိုင်းစီးနင်းကျော်ဖြတ်နေရတာ အရင်ပြီးဆုံးစေ ချင်ပါတယ်။ ကျန်တာဘာကိုမှစိတ်မကူးပါဘူး။ အသက်မပျောက်ဘဲ အိမ်ပြန်ရောက်လာရင် ကျေ နပ်နေပါတယ်။
မေး-ကျောင်းသားဆိုတာက များသောအားဖြင့် အရပ်သားတွေနဲ့ ကွဲပြားတတ်တယ်လေ။ မောင်လေးရဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးပုံစံကိုပြောပေးပါဦး။
ဖြေ-အရပ်သားနဲ့တော့ ကွာသွားတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ခေတ်ကလို ကွဲပြားခြားနားသွားတာမဟုတ်ဘူး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရပ်သား တော်တော်များများကတော့ မြို့တော်ကြီးတွေထဲမှာ နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ကျောင်း သားတွေ ဆိုတာက များသောအားဖြင့် တောကြီးမျက်မည်းလို နေရာတွေမြို့ပြင်တွေ ကျေးလက်တွေမှာ နေရတာများတော့ အများကြီးကို ကွဲပြားသွားပါတယ်။ဒီတော့ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့တွေက အရပ်သားတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့လောက်အောင်ကိုမိုက်ရိုင်းသွားကြတော့ တာပေါ့။
မေး-အခုကိုယ်က ကျောင်းပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ သူများနိုင်ငံကလို ကျောင်းပြီးရင်သူတို့ဆီမှာလာ လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတာတို့ ဘာတို့ရှိနေပြီလား?
ဖြေ-အခုထက်ထိတော့ အဲဒါမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟိုနေ့က ပါချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ကပ်ထား တာကတော့ ဒီကနေ ဘွဲ့ရသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဗထူးဗိုလ် သင်တန်းကျောင်းမှာ တက်ဖို့ ခေါ်ထားတဲ့ စာတော့တွေ့ပါတယ်။ OTS လို့ခ်ါတာပေါ့ဗျာ။ ဒါလောက်ပါဘဲ သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အလုပ်ရရေးမရရေးသည် ကျောင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အလုပ်ရှင်တွေ အနေနဲ့ကရော ပြီးတော့ အစိုးရပြန်တမ်းဝင်စာမေးပွဲလို့ ခေါ်တဲ့ PSC စာမေးပွဲအနေနဲ့ရော ကျောင်းသားတွေကို ဘွဲ့ရပြီးပြီးခြင်း ခန့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘွဲ့ရတာသည် အလုပ်ရဖို့ အထောက်အကူကောင်းတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကို ကျောင်းပြီးပြီးချင်း အလုပ်တန်းရတာတို့ ဘာတို့ဆိုတာက လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အမျိုးနီးစပ် တော်နေသလား ဥပမာပြောရရင် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘကြီးဘုန်းကြီးနဲ့ ကိုယ်က ခင်နေရင်လောက်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ စောစောကပြောတဲ့ PSC စာမေးပွဲဆိုတာက တော့ဖြစ်နိုင်ရင် ကံစမ်းမဲပေါ့နော်။ လူ ၁၂ ဦးစာခေါ်တယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် ၁၀ဦး လောက်က ဖြေဖြေ မဖြေဖြေ အလုပ်ရကြမှာဖြစ်ပြီးသားပါ။ ကျန်တဲ့ ၂ နေရာစာကိုတော့ကျွန် တော်တို့ ဘွဲ့ရ ပညာတတ် အယောက် ၅၀၀ လောက်က ကံစမ်းကြပါတယ်။
မေး-ကျောင်းမှာ ဆရာပြန်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသေးလား?
ဖြေ-လုံးဝကိုမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ တစ်ကယ်ကို မရှိတာပါ။ မသိတဲ့သူတွေက မတတ်တဲ့သူတွေကို ပြန်သင်ပေးရတာလောက် စိတ်ကုန်စရာမရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကစာသင်တယ်ဆိုရင် စာဘဲသင်ချင်တာပါ။ ကြက်ဆူပင်စိုက်ရတာတို့၊ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ရတာတို့၊ ဂိတ်ဂျူတီ စောင့်ရတာတို့ မလုပ်ချင်ပါဘူး။
မေး-ကိုယ်ယူုထားတဲ့ မေဂျာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်ကို စိတ်ကူးနေပါသလား?
ဖြေ-လုံးဝကို စိတ်မကူးပါဘူး။ လုပ်စားလို့ လည်းမရပါဘူး။ လုပ်စားစရာ နေရာလည်းမရှိပါဘူး။ မိဘလက်ငုတ်စီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားတစ်ခုဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကူးရပါလိမ့်မယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် လမ်းဘေးပလက်ဖေါင်းမှာ ခိုးကူးခွေလေးတွေ ချရောင်းဖြစ်ချင်လည်း ရောင်းဖြစ်မှာပါ လမ်းဘေး ကွမ်းယာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်လောက်ဖွင့်ဖြစ်ရင်လည်း ဖွင့်ဖြစ်မှာပါ။ သေသေချာချာတော့မပြော နိုင်သေးပါဘူး။
မေး-မောင်လေးရဲ့ ပညာ အပေါ်သုံးသပ်ချက်ကလေး သိပါရစေ။
ဖြေ-တစ်ချို့တွေကပြောကြပါတယ် ပညာစီးပွားဆိုတာပေါ့။ ဒီနေ့ခေတ် ပညာရေးက စီးပွားရေးဆန် လာတယ်တဲ့။ အကောင်းမြင်တဲ့သူ ရှိသလိုအဆိုးမြင်တဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဘာပြောပြောပေါ့ ပညာရေးမှာ ငွေကအဓိကဆိုတာတော့ အားလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်။ ပြောရရင် ဆရာ လူထုစိန်ဝင်းပြောပြောနေကြပေါ့။ ပညာသင်တာစဉ်းစားတတ်စေချင်လို့တဲ့ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့ပညာ ဆိုတာကတော့ မူလတန်းကနေ ဒီနေ့အထိ အလွတ် တွေကျက်ပြီး အလွတ်တွေချရေးပြီးအောင်မြင်လာတာပါဘဲ။ အခုနေ ကျွန်တော့်ကို အလွတ် ကျက်ခဲ့တဲ့ စာတွေ ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့စာတွေကို ပြန်မေးကြည့်ပါ ကျွန်တော် မြန်မာလို တစ်လုံးမှ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ချရေးခိုင်းရင်တော့ ကောင်းကောင်းကို ရေးပြနိုင်ပါတယ်။
မေး-မကြာခင် နိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောင်ကြတော့မယ်လေ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲ။ ကို့တိုင်းပြည် ကို့လူမျိုးအတွက်ပေါ့ ?
ဖြေ-ဘာမှမပြင်ဆင်ထားပါဘူး။ ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားချင်ရင် ဒါမျိုးတွေ မမေးပါနဲ့လား။ တစ် ကယ်တော့ ဒါတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့အလုပ်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူဘဲ တက်တက်ပေါ့နော် ရပ်ကွက်ထဲက ပဲပြုတ်သည်တွေ လဲပဲပြုတ်ဆက်ရောင်းကြမှာဘဲ ဆိုက်ကားဆရာတွေလည်း ဆိုက်ကားဆက်နင်းကြမှာဘဲ။ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုလားကြီးကို ကုလားကြီးလို့ခေါ်ခေါ် မာမူကြီးလို့ခေါ်ခေါ် အရားကြီးလို့ခေါ်ခေါ် ကုလားက ကုလား ပါဘဲ။ကျွန်တော်ဘာမှမပြင်ဆင်ထားပါဘူး။ ဒါတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ တပ်မ တော်ကြီးရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိ အင်အားမတောင့်ဘဲနဲ့ အခြေအနေ ကိုကြို တင်မသုံးသပ်ဘဲနဲ့ ၀င်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ပါတီငယ်လေးတွေကိုတော့ သနားပါတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူး။ အခုကို အဖြေကရှင်းနေပြီလေ ပါတီလေးတွေက ပိုက်ဆံမရှိလို့ ညည်းတွားနေကြချိန်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ စီးပွားရေလုပ်ငန်းရှင် အကြီးစားကြီးတွေဖြစ် နေကြပါတယ်။ ဒီတော့ကျောင်းသားဆိုတာကရော ဘာများတတ်နိုင်နေဦးမှာလဲဗျာ။
ကျွန်တော်ကလည်း အခုလိုမေးမြန်းပေးတဲ့ အစ်မကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းတိုင်း တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ဆိုင်းဘုတ် ငယ် ဆိုင်ဘုတ်လတ်ဖြင့် ၊ “ပညာမြင့်မှ လူမျိုးမြင့်မည်” “ပညာရေးဖြင့် ခေတ်မှီနိုင်ငံ တော်ကြီး တည်ဆောက်ကြအံ့” စသဖြင့် စသဖြင့် တွေ့ရှိပါတယ် ၊ ပညာတော့မသိပါ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကတော့ ဖြင့် မြင့်လွန်းသဖြင့် လက်နှင့်မမှီပါ ဆေးသုတ်သည့်အခါ လှေကားဖြင့် တက်သုတ်တာကို တွေ့မြင် ခဲ့ရပါတယ် ၊ ပညာရေးအတွေ့အကြုံ အများကြီးရှိတဲ့ ယခင် ဖဆပလ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးမှူး မဏ္ဍိုင်သတင်းစာ ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာဆရာကြီး ကျွန်တော့ ဘိုးဘိုးကို ကျွန်တော်က ဘိုးဘိုး ဒီဆိုင်းဘုတ်က မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာသားတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြပေးပါအုံးလို့ ပြောတော့ “အဲဒါငါ့မြေးတို့ကို နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ဖို့သတိပေးထားတာ”လို့ ရှင်းပြပါတယ် ၊ အော် ကျွန်တော်အဘိုးနောက်နေတာလို့ ထင်ခဲ့မှိပါတယ် အဘိုးတကယ်ပြောခဲ့တာလို့ ကြီးလေ သိလေဖြစ်လာပါတော့တယ် ၊ “ငါမြေးတချိန်က တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ မောစီတုန်းခေတ်ထတုန်းက အခုလိုဘဲ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေနဲ့ လောက်စပီကာ အသေးလေးတွေနဲ့ ၊ ရေးခဲ့ အော်ခဲ့လို့ နယူးယောက် တိုင်းသတင်းစာမှာ noticeborad administration လို့တောင် နာမည်ပေးခံခဲ့ရသေး တယ်ကွယ် ၊ ဆိုင်းဘုတ်ရေးပြီး ဆိုင်းဘုတ်ထဲက စာသားနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်တာ ကြိုးနီစနစ်ရဲ့ လုပ်ထုံး တစ်ခုဘဲကွာ ၊ မင်းနောင်တော့ သိပါလိမ့်မယ် ။ ဒီအမေးအဖြေလေးဟာ ရုတ်တရက် ကြည့်ရင်တော့ဖြင့် ရီစရာလေးပါ ၊ သို့သော် ကျွန်တော်တို့တတွေကတော့ အရွယ်ရောက်ပြီ ဖြစ်လို့ ကိစ္စမရှိကြတော့ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ညီလေး ညီမလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ကနေ ပေါက်ဖွားလာမဲ့ သားမြေးမြစ်တို့ အတွက်တော့ ရင်မောစရာကောင်းလှပါတယ်၊ ဘိုးဘိုးပြောပြတာက ဟိုးတချိန်တုန်းက ငါ့တို့ရဲ့ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးဟာ အာရှမှာ တစ်တဲ့ ၊ ဒို့တက္ကသိုလ်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေ အများကြီးလာ တက်ကြတယ်ကွယ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝန်းထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လိုသာ ပြောကြရတယ် ၊ တက္ကသိုလ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ကြီးက အုပ်ချုပ်ပြီး ၊ နိုင်ငံခြားက ဧည့်ပါမောက္ခတွေ ဆိုတာ ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးဘဲ “အခြေလေးချောင်း တော်လှန်ရေး” စာအုပ်ကိုရေးတဲ့ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီး ဂျော့ရှိုးဝဲလ် တောင် ဒီမှာ ပါမောက္ခဖြစ်ဖူးသေးတယ်ကွယ် ။၁၉၆၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ တက္ကသိုလ်ကြီးထဲ ကအင်္ဂလိပ်စာ စနစ်ကို အစိုးရက ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ် တက္ကသိုလ်ကြီးကိုလဲ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တယ် ၊ တကယ်လား ??? အော် ဒါကြောင့်ကိုး…….။ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းက အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ၀န်ကြီးချုပ် ၀င်စတန်ချာချီရဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ခုထဲမှာ “တိုင်းပြည်ထဲက ကလေးတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပဲ ၊ နိုငံတစ်ခုရဲ့ အနာဂတ်ကို ကြည့်ချင်ရင် အဲဒီနိုင်ငံက ကလေးတွေကို ဆိုင်ရာအစိုးရက ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ယုံနဲ့သိနိုင်တယ်”လို့ ပြည်သူတွေကို မိန့်ခွန်းပေးသွားဖူးပါတယ် ။
ဟိုတလောက ဆရာအောင်သင်းရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ အခွေလေး နားထောင်လိုက်ရတယ် အဲဒီထဲက နွေရာသီရောက်ရင် မီးသတိပြုဖို့ နှိုးဆော်တတ်တဲ့ အဆိုတော်ဦးထွန်းရွှေရဲ့ မီးဘေး ရှောင်ဗျို့ မလောင်ခင် တားကြပါ ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ မူလသီချင်းစာသားလေးကို ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းက ဒီလိုလေး ဆိုပြသွားပါတယ် …………
ဗမာပြည်ကြီးမှာ အဆင့်အတန်းလုလို့ ညစ်ညမ်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာ
ပညာ အခြေခံနည်းလို့သာ... ပါတီတွေ ကွဲကာ အလွဲလွဲအမှားမှား ဖြစ်ပေါ်နေတာဟာ
ပညာ...... ပညာ......ပညာ .မရှိလို့ စိတ်နေ မမြင့်ကြတာ ။
၀မ်းနည်းစရာ ယခုခေတ်ကြီးမှာ တွေ့မြင်ရတာ
ကလေးသူငယ်များမှာ ဘတ်စ်ကား စပယ်ယာ
သတင်းစာ ရှောက်သီးဆေးပြား ရေခဲချောင်းနဲ့ မြေပဲလှော်ပါ
တကြော်ကြော်အော် ကာ ရောင်းနေရရှာ....
ရသမျှနဲ့ အမြတ်လေးများနဲ့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ် ပျော်ရွှင်ကာ
ပညာ ... ပညာ ... ပညာမရှိလို့ အခုလို ဖြစ်ရတာ ။
အားလုံးရွင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ငွေလမင်းတို့က ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။
Posted by ငွေလမင်း at 1:14 AM 11 comments